Tsanangudzo uye Tsanangudzo, Kufunga Nekuparadzwa - Shoko Rheyo
Kufungisisa uye Kugumisa Tsanangudzo
Mitemo nemitsara kubva Kubva nekurangarira
Njodzi, An: inowanzoti ndeyekuitika kusingatarisirwi kana chiitiko pasina pachena chikonzero. Kunyange zvakadaro, njodzi ndiyo imwe chete inoratidzika muchechina kana sedenderedzwa yeunobserved kana inotangira zvinokonzera zvinokonzera kuitika ikoko kunonzi njodzi. Zvimwe zvikamu zvependeredzwa ndiyo pfungwa uye zviito zvakabatanidzwa nengozi.
Aia: ndiro zita rakapiwa kune imwe unit iyo yakafambira mberi zvichibudirira kuburikidza nedhigirii rimwe nerimwe pakuziva sekushanda kwayo muYunivhesiti yemitemo, mune muviri wakakwana, usina zvekuita uye usina kufa; iyo yakapedza kudzidza kubva kune zvakasikwa, uye iri kune yakangwara-sega sechinhu kana kuti mutsara unoisanidza kubva kune-yakasikwa.
Kunwa doro: chirwere chepfungwa chemunhu anoita chishuwo-uye-kunzwa, icho chirwere muviri wenyama une hutachiona nekumwa doro rinodhakisa. Doro rakanakisa uye rakavimbika, asi richichengetwa semuranda, kana kushandiswa senge svikiro mukugadzira mishonga yekugadzirira. Asi doro, semweya, harina tsitsi uye harirambe kana rikava tenzi. Iyo ingori nyaya yenguva, mune ino kana humwe hupenyu hweramangwana, apo muiti wese achazoda zvekutarisana neanopenga nekukunda kana kukundwa nazvo. Doro harikuvadzi, kana mumwe akasanwa; inongova svikiro. Asi kana munhu akanwa t, mweya wekuti doro iri svikiro unosangana nechishuwo muropa uye nekumira mumitsipa uye unosanganisa chishuwo nekunzwa mukutenda kuti ishamwari, uye kutenda uku kunokura nekukura. Iwo mweya wekutendeseka uye kuyanana kwakanaka kuburikidza nematanho ese eudhakwa kwaunotungamira kwaanobata. Uye kana muiti wacho pakupedzisira anyanya kushatirwa kuti atore chimiro chemunhu, uyo anotungamira anoitungamira kujeri rayo mukati mekatikati mepasi, uko kwainogadzikana mune inertia inoziva. Kuziva inertia kunotyisa uye kunotyisa kupfuura moto unotyisa wechero dzidziso yezvouMwari kana imwe gehena inofungidzirwa. Doro mweya unochengetedza mune zvakasikwa; asi inouraya chinhu chainochengetedza. Mweya wekudhakwa unotya Chiedza cheConscious chiri mumunhu, uye unoedza kushayisa simba munhu. Iyo chete nzira yechokwadi yekuve ishe uye kwete muranda wemweya wedoro ndeiyi: Usazviravira. Iva nemafungiro akasimba uye akajeka epfungwa uye wakagadzika kuti usazvitore pasi pekunyepedzera kana fomu. Ipapo mumwe anenge ari tenzi.
Hasha: chiri chido chinopisa muropa uye kuita zvakatsamwa pane izvo kana kuti zvinofanirwa kuva zvisina kururama kune iwe pachako kana kune mumwe.
Kuonekwa: iyo yakasikwa yakasanganiswa yakaiswa muhukuru kana fomu uye inoonekwa; iyo inenge ichida kuchinja kana kuparara, apo izvo zvinosungirirana pamwe chete zvinoshanduka kana zvisiyiwa.
Appetite: ndicho chido chekuratidza kunakidza nekunhuhwira nezvinhu, mukupindira kune chido chezvikwata zvezvakasikwa kuchengetedza nyaya inopararira.
Art: unyanzvi mukutaura kwekunzwa uye chido.
Astral: iri nyota nyaya.
Astral Body: sezwi rinoshandiswa mubhuku rino nderokuti tsanangudzo yakajeka-yakasimba yemuviri wenyama. Mimwe mitatu ndiyo inonzi airy-yakasimba, yakasviba-yakasimba, uye yakasimba-yakasimba. Mhepo-yakasimba uye inonaya-yakasimba ndeyevanhu vazhinji, haisi
yakagadzirwa kuva mufananidzo. Mumuviri wepasika ndiyo inoumba nyaya yomuviri unokura maererano nemufananidzo wefomu-kufema kusvika pakuzvarwa. Shure kwaizvozvo, muviri wenyama unofanirwa nemuviri wepasi kuti uchengetedze chimiro chawo mune chimiro
maererano nemufananidzo wefema-fomu. Mushure mokunge fomu-kufema inobva mumuviri pafa, muviri wechidimbu unoramba uri pedyo nepakagadzirwa. Zvadaro muviri we astal unobva pane chimiro chekuchengetedza, uye unopararira se
Atmosphere: iyo yakawanda yezvinhu zvakasiyana-siyana izvo zvinobuda kubva uye zvinopoteredza chero chinhu kana chinhu.
Atmosphere, Physical Human: iyo yakawanda yakawanda yemhepo inopenya, inokonzerwa nemhepo, inoyerera, uye miviri yakasimba inobva kubva uye yakaramba ichitenderera mumitsara mina inogara iine miviri mukati uye kuburikidza nemuviri nemhepo, kufema kwemafomu-fomu.
Atmosphere of the Human, Psychic: iyo inobata rutivi rwemuiti, chikamu chepfungwa cheMutatu weTunune, chikamu chisingaiti chechikamu chimwe chazvo chiripo muitsvo uye adrenals uye mitsipa yokuzvidira uye neropa remuviri womunhu. Iyo inokwira, mapaundi, inokwevera uye inoputira kuburikidza neropa nemisungo yemuviri mukupindura kune chido uye kunzwa kwemuiti iyo inowanikwazve mumuviri.
Atmosphere of the Human, Mental: iyo ndiyo chikamu chepfungwa mupfungwa yeTurune Self iyo iri kuburikidza nemafungiro epfungwa uye nenzira iyo mafungiro-pfungwa uye chido-pfungwa dzinogona kufungidzira pane zvematongerwe enyika pakati pekusavhiringidzika kubuda nekubuda kwekufema.
Atmosphere, yeWe's Triune Self, Noetic: ndeyekuti, kuti, gungwa, rinobva kune iyo Chiedza cheChenjeri inotungamirirwa nemafungiro epfungwa uye nemapfungwa kumunhu anoita-mu-mumuviri kuburikidza nemweya.
Atmosphere of Earth: inoumbwa nenzvimbo ina dzakakomberedzwa kana masasa emhepo inopenya, airy, fluid, uye yakasimba iyo inoramba ichitenderera ichiramba ichibva uye uye kuburikidza nekwakatanidzwa uye yakaoma pasi pasi, uye kubva uye kuburikidza nekati mukati kusvika kune imwe nyeredzi nyeredzi.
Breath: ihwo hupenyu hweropa, mutadzi uye kuvaka mhuka, muchengetedzi uye muparadzi, kana mukati maro maitiro ose omumuviri anoenderera mberi aripo kana kuti kupfuura, kubva pakufunga kuti inoitwa kuti idzokezve uye idzose muviri upenyu husingaperi.
Breath-form: iri chimiro chechimiro icho chiri chimiro chega mweya (soul) yemuviri wemunhu wese. Kufema kwayo kunovaka uye kunogadzirisa uye kunopa hupenyu huri maererano nemufananidzo wakagadzirwa nechimiro, uye chimiro chacho chinoramba chichiita chimiro, muviri waro, panguva yekuvapo kwomuviri. Rufu ndicho chikonzero chekuparadzaniswa kwaro kubva mumuviri.
Cell, A: isangano rinoumbwa zvikamu zvishoma zvemashoko kubva pamvura inopenya, inokonzerwa nemhepo, yemvura, uye yakasimba, yakarongeka kuva sarudzo yehupenyu nehutano hwakagadzikana uye hwekugadzirisa kwezvikamu zvina zvakanyora: breath-link,
life-link, form-link, uye cell-link muparadzi zvikamu zvinogadzira iyo cell, iyo isingaoneki, kwete muviri wezvinyorwa zvishoma zvinogona kuonekwa kana kuonekwa pasi pekroscope. Zvinyorwa zvina zvakanyatsobatanidzwa
pamwe chete uye kugara muchechi iyoyo; iyo miviri inopfurikidza yakafanana nemitozi inoyerera inobva iyo makumbani anoramba achibata uye kuumba zvikamu zviduku mukati uye semuviri weiyo masero panguva yekuenderera kwesangano guru iro iyo sero iri chikamu chikamu. Zvinyorwa zvina zvesero rechiteri mumutumbi wemunhu hazvigoneki; apo iyo isingabhadharwi nezvikamu zvishoma zvemuviri masero achapera, kuparara uye kuparara, asi vanyori vekamuri vachavakazve muviri pane imwe nguva yemberi.
Chance: ishoko rinoshandiswa kuzvizvidzivirira pachako nekuda kwekusanzwisisa, kana kutsanangura zviito, zvinhu uye zviitiko zvinoitika uye zvisiri nyore kutsanangurwa, se "mitambo yemukana," kana "zviitiko zvenguva." Asi hapana chinhu chakadai sechiitiko, mupfungwa yokuti chiitiko chingave chakaitika mune imwe nzira ipi zvayo kunze kwezvaakaita, pasina hurumende uye kurongeka. Chiito chega chega chekukwanisa, zvakadai sokupera kwemari, kushanduka kwekadhi, kukanda kwefa, kunoitika maererano nemimwe mitemo uye mukurongeka, kana zviri maererano nemitemo yefizikiki kana mitemo yekunyengera uye unyengeri. Kana izvo zvinonzi mukana zvakange zvisingabvumirwi nemutemo, pakanga pasina mitemo yakavimbika yezvakasikwa. Zvino pakanga pasina kuve nechokwadi kwemawaka, emasikati neusiku. Aya ndiwo mitemo yatinonyatsonzwisisa, sezvakangoita "zviitiko" zviitiko, izvo zvatisatori matambudziko akakwana kunzwisisa.
Unhu: ndiyo kuwedzerwa kwekutendeseka uye kutendeseka kwemanzwiro nemanzwiro ako, sezvinoratidzwa nemafungiro ake oga, shoko uye chiito. Kutendeseka uye kutendeseka mupfungwa uye chiito ndizvo zvakakosha
unhu hwakanaka, kusiyanisa zviratidzo zvehusimba uye ane hanya uye usingadi kutya. Unhu hunozvarwa, hwakagara nhaka kubva kune hupenyu hwako hwekare, semuenzaniso wekufunga nekuita; inopfuurirwa kana kuchinjwa sezvinosarudzwa nomunhu.
Komisheni: ndiko kuzvifunga kune ukama nekururama, uye pakugamuchira Chiedza, maererano nehurongwa hwekufunga.
Mucheche, Mwari, "Akasvibiswa": haisi kuiswa kwechihedheni mumukadzi, kunoteverwa nekuzvara uye kuberekwa kwemwe muviri wenyama. Kuberekwa kwepabonde hakugoni kubva pamuviri waMwari. Ichokwadi kuti "kutadza" kubata ndeyekuvakwazve kwekusafa kwenyama yenyama yerufu kuve muviri wakakwana usina hupombwe hwehupenyu husingaperi. Apo vane gumi nemaviri vasati vagara mishonga yemwedzi vakave vakabatana nemwedzi wechigumi nematatu girasi, pakudzoka kwayo kumusoro, iyo inosangana nemhepo yezuva, uye inogamuchira ray reChiedza kubva muItelligence. Icho ndiko kuzvidzora, kubata kwaMwari. Kuvakwa kwemuviri wakakwana kunotevera.
Hana: ihwo huwandu hwezivo pamusoro pezvinofanirwa kuitika maererano nehupi zvese zvetsika. Ndiyo imwe yemirairo yekufunga kwakarurama, kunzwa kwakarurama, uye chiito chakanaka; iyo inzwi risina maturo rekururama mumoyo rinorambidza kufunga kupi neipi kana kuita zvinoshandiswa kubva pane zvaanoziva kuti zvakarurama. Iko "Kwete" kana kuti "Usaiti" izwi remuiti wevadzidzisi pamusoro pezvaanofanira kudzivisa kana kusaita
kana kuti kwete kupa mvumo yekuitwa chero mamiriro ezvinhu.
Kuziva: iri, neruzivo; iyo iyo iyo iyo inozivikanwa inozivikanwa maererano nekuziva.
Kuziva: ndiHupo muzvinhu zvose-izvo chinhu chimwe nechimwe chinoziva mumwero iwoyo unoziva as chii kana of kuti chii kana kuita. Shoko iri ndiro chirevo che "chizivo" chakatanga kuva nezita
icho chakakwana "ness." Izwi rimwe chete mumutauro; harina zvinyorwa, uye zvinoreva zvinopfuurira kunze kwekunzwisisa kwevanhu. Kuziva hakuna kutanga, uye kusingaperi; hazvisi pachena, pasina zvikamu, unhu, hunoti, unhu kana zvikanganiso. Asi, zvose, kubva kumuduku kusvikira kune mukuru, munguva uye kupfuura uye nzvimbo inobva pane iyo, kuva uye kuita. Kuvapo kwayo muzvinhu zvose zvechisikwa uye kunze kwezvisikwa zvinoita kuti zvinhu zvose uye zvisikwa zvive nehanya as chii kana of izvo zvavari, uye ndezvekuita, kuti vazive uye vazive zvimwe zvinhu zvose nezvisikwa, uye kuti vafambire mberi mukuenderera mberi zvidimbu zvakakwirira zvekuziva kune imwe chete yeChokwadi-Kuziva.
Credulity: ndiko kutarisira kusina mhaka kwemuiti-mu-mu-muviri kuti vatende kuti zvinhu zvakafanana nezvinoonekwa, uye kugamuchira sezvokwadi zvinotaurwa kana zvakanyorwa.
Tsika: ndiyo kukura kwakakwirira kwekudzidza, unyanzvi uye unhu hwevanhu, kana hwekubudirira sehuse.
Rufu: ndiko kubuda kwehupenyu hwekuzviziva mumuviri kubva pakunogara kwenyama, kubhururuka kana kuparadzanisa tsvina yakanaka yakasimbiswa inobatanidza fomu-kufema nemuviri. Kuparadzanisa kunokonzerwa neanoda kana nemvumo yega kuti muviri wako ufe. Nekuputsa kwetambo, kudzorerwa hakugoneki.
Tsanangudzo: ndiko kuumbwa kwemashoko akafanana anoratidza zvinoreva senyaya kana chinhu uye, nekufunga pane izvo, ruzivo runowanikwa.
Descent of Man: rave rakasiyana-siyana uye rakafananidzirwa mumagwaro ekare, semuBhaibheri nyaya yaAdam naEvha mubindu reEdheni; muedzo wavo, kuwa kwavo, chivi chavo chepakutanga nokudzingwa kubva muEdheni. Ichi
inoratidzwa sezvikamu zvina pakusimuka kwemuiti-mu-mu-muviri kubva kuMuzinda wePermanence. Kubva kunzvimbo yeHumambo hwekusingaperi kusvika munyika ino yekuzvarwa nekufa, kwaive nekusiyana, kupatsanurwa, kuchinjwa uye kupera. Kusiyana kwakatanga apo muiti wechido-uye-kunzwa akawedzera chikamu chemuviri wake wakakwana ndokuona kunzwa mune rumwe rutivi. Kuparadzana kwaiva muiti aiona kudiwa kwaro mumuviri wemurume uye manzwiro ayo mumutumbikadzi uye kuzvifunga semapiro maviri pane imwe chete, uye kubva pakusingaperi. Kugadziriswa kwaiva kuburuka kana kupararira kubva mukati uye kunopera kune imwe kunze uye pasi yezvinhu uye kuchinja muhutano hwemuviri. Kuita zvekutengesa kwakanga kuri kuuya kune kubuda kwekunze kwepasi, kukurudzirwa nhengo dzepabonde uye chizvarwa chezvirwere zvepabonde.
Chido: inoziva simba mukati; zvinounza kuchinja mazviri uye kunokonzera kuchinja mune zvimwe zvinhu. Chido ichocho chinoshingaira chemuiti-mu-mu-muviri, rutivi rwusingaiti rwekunzwa; asi chido hachikwanisi kuita pasina imwe yerimwe rutivi rusingagoni kuparadzaniswa, kunzwa. Chido chisingaoneki asi chinoratidzika chakaparadzaniswa; iyo inofanira kusiyaniswa se: chido chezivo uye chido chepabonde. Izvo, nekunzwa, chikonzero chekugadzirwa nekuberekwa kwezvinhu zvose zvinozivikanwa kana zvinotaridzirwa nevanhu. Sezvo kuchida kwepabonde kunoramba kusina kujeka, asi kunoratidzira kuburikidza nematavi ayo mana: chido chekudya, kuda kwefuma, kuda kwezita, uye kuda kwesimba, uye zvisingagoni kuverengwa, sezvinzara nenzara, rudo, ruvengo , rudo, utsinye, kukakavara, makaro, chido, chido, kuwanikwa, nekuita. Chido chezivo hachizoshandurwi; inoramba ichiita sechido chokuzviziva.
Chido cheZita, (Mukurumbira): iboka rekuona kwezvinhu zvisingagumi zveunhu, izvo zvisingabatsiri uye evanescent sebubu.
Chido cheMasimba: ndiyo kunyengedzwa kwakasikwa iyo ndiyo mbeu uye muvengi wechido chokuzviziva-(chido chokurara).
Chido Chokuzviziva: ndicho chido chakatsunga uye chisingadikanwi chemuiti kuti ave muhukama hwakanaka kana kubatana nemuzidzi weTatu yega Self.
Chido Chokurara: ndezvoudyire hunokonzerwa mukusaziva pamusoro payo; chido icho chinoratidzwa nehupombwe yemuviri mairi, uye chinoda kubatanidza nechekudzivirirwa uye chisingaoneki, pamwe nekubatana nemuviri wevasikana.
Kuora mwoyo: ndiko kuzvipira kune kutya; kusunungurwa kusina kubvumirwa kuti zviitike kuti chii chingave.
Destiny: chinhu chinokosha; izvo zvinofanira kuve kana kuitika, semugumisiro wezvave zvichifungwa uye zvataurwa kana zvaitwa.
Destiny, Physical: kunosanganisira zvose maererano nehutano nekugadzwa kwemuviri wemuviri; mafungiro, zvepabonde, maitiro, uye zvikamu; hutano, chinzvimbo muupenyu, mhuri, uye hukama hwevanhu; nguva yeupenyu uye
nzira yekufa. Muviri nezve zvese zvine chekuita nemuviri iri bhajeti rechikwereti uye chikwereti chakauya kubva paupenyu hwekare hwekare semhedzisiro yezvawakafunga nekuita muhupenyu ihwohwo, uye neuyo munhu waunofanira kubata nawo muhupenyu huripo Mumwe haakwanise kutiza zvakaita muviri uye unomiririra. Mumwe anofanirwa kuzvigamuchira uye kuramba achingoita sepakutanga, kana mumwe anogona kuchinja izvo zvakapfuura kuita izvo zvaanofunga uye kuda kuve, kuita, uye kuva nazvo.
Destiny, Psychic: Izvo zvose zvine chokuita nekunzwa-uye-chido semunhu unozviziva mumuviri; ichi ndicho chikonzero chezvakaitika mune imwe yapfuura uye zvaifunga uye zvakaitwa, uye zvezvo zvichaitika mune ramangwana
izvo zvino zvinodikanwa uye zvinofunga uye zvinoita uye zvichaita kuti munhu afunge-uye-chido.
Destiny, Mental: yakagadzirirwa sei, yei, uye, uye chii icho chido uye kunzwa kwemuiti-mu-mu-muviri anofunga. Mifungo mitatu-pfungwa yemuviri, pfungwa-chido, uye pfungwa-pfungwa-dzinoiswa mubasa remuiti, nemufungidziri weTurune Self yake. Kufunga kunoitwa nemuiti nemafungiro aya matatu ndeyekupedzisira kwepfungwa. Mhedziso yadzo mupfungwa iri mumamiriro ayo ekufunga uye inosanganisira mafungiro ayo, mafungiro epfungwa, kugona kwepfungwa uye zvimwe zvipo zvepfungwa.
Destiny, Noetic: ndiyo chiyero kana chiyero cheUzivo-ruzivo rwekuti kune mumwe wekunzwa uye chido, chinowanikwa, chiri mune chikamu chechihedheni chinyorwa chiri mumoyo wepfungwa. Ichi ndicho chikonzero che
kufunga kwevanhu uye kushandiswa kwesimba rekusika nekuita; inoratidzika sehuchenjeri hwevanhu uye hukama hwevanhu kune rumwe rutivi, uye kune rumwe kuburikidza nehupenyu hwenyama, sematambudziko, matambudziko, zvirwere, kana
hutera. Kuziva-zivo kunoratidzwa nekuzvidzora, kutonga kwekunzwa nemanzwiro ako. Mhedzisiro yako yemunhu inogona kuonekwa munguva yenhamo, apo munhu anoziva chaizvo izvo zvinofanira kuitirwa iwe pachako nevamwe. Inogonawo kuuya semafungiro ekujekesa panyaya.
Dhiyabhorosi, The: ndicho chaanoda chido chakashata. Iyo inoedza, zvibayiso uye inotungamirira chimwe kune chimwe chinhu chisina kunaka muupenyu hwemuviri, uye zvinotambudza kuti mumwe panguva yezvikamu zvaro mushure mekufa inotaura.
encombrements: ndeyenyaya, kwete yepakati; nzvimbo haina matanho, nzvimbo haina kusimba. Kuyera kwezvikwata; zvikamu zvisingaoneki zvikamu zvemukati nyaya; saka nyaya yacho inogadzirwa, inoumbwa kana kuti semakamuri asingatarisiki akaenzana uye akaparadzaniswa kubva kune mumwe nomumwe nemhando dzakasiyana-siyana dzenyaya, sehupamhi. Nyaya ndeyezviyero zvina: on-ness, kana pamusoro pezvinhu; in-ness, kana nenyaya yekona; kubudirira, kana mutsara; uye kuvapo, kana kuti nyaya. Nhamba iyi inobva kune yakaonekwa uye yakananga kune iri kure.
Nhamba yekutanga yeiyuniti, in-ness kana pamusoro pezvikwata zvepamusoro, hainzwisisi zvakadzika kana kuoma kana kusimba; inobva pane uye inonyanya kuda yechipiri neyeshatu maitiro kuitira kuti ionekwe, inooneka, yakasimba.
Nechipiri chechipiri cheiyuniti chiri mu-ness kana kuti nyaya yekona; zvinoenderana nechetatu chimiro chayo kuti chigadzikane pane zvisikwa sepamusoro.
Nzira yechitatu yeiyuniti ndeyekuburikidza kana kuti nyaya yemukomana; zvinoenderana nechina yechina yekutakura, kutenderera, kutumira, kutakura, kutumira uye kutumira kune imwe nyaya kubva pane zvisiri izvo zvisingatariswi nyaya kusvika mukati-ness uye kugadzirisa nzvimbo pamusoro payo uye naizvozvo muviri uye unogadzikana panzvimbo dzakasimba pane zvinhu.
Chikamu chechina chemauniti ndechokuvapo kana kuti nyaya inokosha, kupatsanurwa kwemashoko seyiyo nyaya huru yenyaya yepfungwa, iyo iyo kana kuti iyo inotevera chidimbu chegadzirisa nyaya inovakwa uye yakagadzirwa. Nokudaro zvichabva kuonekwa kuti kusaratidzwa kwekusarudzwa kwemashoko kunoratidza kana kana kuburikidza kana kuburikidza nechinhu, uye sekutsanangurwa kwemashoko sechinhu chakakosha chezvikamu zvezvikamu, kuburikidza nenzira iyo inotevera chimiro chezvikwata sechinhu chendaneti chinogadzirwa, uye kuburikidza nayo iyo in-ness kana angle angle, iyo inobatanidza nzvimbo pamusoro penzvimbo kusvikira zvinoonekwa zvinooneka zvakasimba nyaya inoratidzwa sezviitiko, zvinhu uye zviitiko zvenyika ino chinangwa chenyama.
Dendaase: Chirwere chinokonzerwa nekugadzirisa kwekufungidzira kwepfungwa sezvo ichiri kupfuurira kuburikidza nechikamu kana muviri kuti unotarisana, uye pakupedzisira kugadziriswa kwekufunga kwakadaro chirwere.
Kuvimbika: ndiko kufunga kana kuita zvinopesana nezvinozivikanwa kuti zvakarurama, uye kufunga nekuita kwezvinozivikanwa kuti hazvina kururama. Iyo iyo yekufunga nekuita ingazopedzisira ichiita kuti itende kuti izvo zvakanaka hazvina kururama; uye kuti chii chakashata chakarurama.
Muiti: Chikamu ichocho chinocherechedza uye chisingaverengeki cheTunune Self iyo nguva nenguva inowanikwa mune muviri wemunhu kana muviri wemukadzi, uye iyo inowanzozviratidza semuviri uye nezita remuviri. Iyo ndeyezvikamu gumi nembiri, zvitanhatu zvayo inoshingaira kwayo sechishuvo uye zvitanhatu ndezvakagadzikana parutivi sekunzwa. Izvo zvikamu zvitanhatu zvinoshingaira zvechido zvinodzokorora zvakare mumitumbi yevanhu uye zvikamu zvitanhatu zvisingabatsiri zvekunzwa zvakare zvakare zviripo mumitumbi yemadzimai. Asi chido
uye kunzwa hakuna kumboparadzaniswa; chido mumuviri wemunhu chakaita kuti muviri uve mukono uye unotungamira manzwiro ayo; uye kunzwa mukati momuviri wemukadzi kwakakonzera muviri wayo kuva mukadzi uye unotonga chikamu chawo chido.
Kukahadzika: ndiyo mamiriro erima repfungwa semugumisiro wekusaziva zvakakwana kufungidzira kuziva zvingaita uye izvo zvisiri kuita mumamiriro ezvinhu.
Kurota: ndeyemagariro uye kuzviisa pasi. Chiroto chinangwa ndechekumuka kana kuti kumuka; zvisinei iyo ndiyo kurota kunomuka. Irope rinotenderera ndiro kurota hope. Misiyano ndeyokuti mukumuka
kurota zvinhu zvose kana manzwi anoonekwa kana kuti akanzwika uye izvo zvinoratidzika sezvakanaka ndezvokuti exteriorizations yemunhu kana yemamwe pfungwa pamusoro penyika yechinangwa; uye, kuti zvinhu zvatinoona kana kunzwa muhope dzehope ndizvo zvinoratidzika pamamiriro ezvinhu evanhu vanozviisa pasi pasi pezvinangwa zvenyika. Apo isu tiri kurota muhope izvo zvinofungidzira zviri chaizvoizvo kwatiri sezvakangoita zvirevo munyika ino inomuka
ikozvino. Asi, zvechokwadi, patinomuka hatigoni kuyeuka kuti chaizvoizvo kurota kwehope kwakange kuripo, nokuti kubva munyika inokurudzira nyika inorota inoita semumvuri uye isingaiti. Zvisinei, zvose zvatinoona kana kunzwa kana kuita muchiroto kana tarara tinofungidzirwa zvakanyanya kana zvishoma kudarika kwezvinhu izvo zvinoitika kwatiri uye zvinhu zvatinofunga pamusoro pedu patinenge takamuka. Kurota kwehope kunogona kufananidzwa negirazi inoratidza zvinhu zvakabatwa zvisati zvaitika. Nokufungisisa pamusoro pezvinoitika muhope dzehope imwe inogona kududzira zvakawanda pamusoro pake pachake, pfungwa dzake nemanzwiro ake, zvaasina kumboziva. Kurota hupenyu kune imwe nyika, yakakura uye yakasiyana. Kurota kwakange kusati kwave, asi kunofanirwa kuve, kusarudzwa, kunyanya kuva mumarudzi uye marudzi. Izvo mushure mekufa nyika dzinofananidzwa nehupenyu hwehupenyu zvimwe sekurota hope kurudzi rwekumuka.
Duty: ndizvo zvinokweretesa iwe pachako kana kune vamwe, izvo zvinofanirwa kubhadharwa, nokuzvidira kana zvisingadi, mune basa rakadaro sokuti basa iro rinoda. Mabasa anosunga muiti-mu-mu-muviri kuti adzokere hupenyu pasi pano, kusvikira muiti achizvibvisa
kuita mabasa ose, nokuzvidira uye nomufaro, pasina tariro yekurumbidza kana kutya kwekupa mhosva, uye kusava nehanya nemigumisiro yakaitwa zvakanaka.
"Gara": ishoko rinoshandiswa kureva chido chakashata kubva pane zvekare mararamiro emuiti mumuviri wevanhu iye zvino, unogara mumhepo yepfungwa uye inoedza kutora muviri uye kukanganisa muiti kune zviito zvechisimba, kana kuti kuita zvinhu zvinokuvadza muiti nomuviri. Muiti ndiye anokonzera zvido zvaro, semunhu agere kana sejasi rezvakaipa; zvishuwo zvaro hazvigoni kuparadzwa; ivo vanofanira kupedzisira vachinjwa nekufunga nekuda.
Kufa: ndiyo yakangoerekana yakareba kana yakareba yakarongeka yehufema-fomu yekuunganidza maitiro ayo akanaka kubva kumagumo kusvika pamwoyo uye zvino kuzvizvidza kuburikidza nemuromo nemagumo ekupedzisira emhepo, kazhinji zvichikonzera gurgle kana kuchinge muhuro. Pakufa muiti anobva mumuviri nemweya.
Nyaradza: ndiwo mugumisiro wechiratidzo chemuiti pakugadzirisa uye pachayo; chimwe chiito chekuita, zvisinei nokuti pfuma kana urombo, nzvimbo mune hupenyu kana mhuri kana shamwari.
Ego: ndiko kunzwa kwokuti "Ini" wevanhu, nekuda kwehukama hwekunzwa kuzivikanwa kwe-I-ness yeTunar Self. Ego kazhinji inosanganisira unhu hwemuviri pachahwo, asi ego ndiyo chete kunzwa wehuzivi. Kana iyo
manzwiro aive maziviro, manzwiro mumuviri aizozviziva pachake sehupenyu husingaperi uye husingadi "I" unopfuurira mberi nekupfuura nguva yose mukuramba kusingagumi, asi hupenyu hwevanhu hauzive nezvayo pachako kupfuura iyo
Element, An: ndechimwe chezvinhu zvina zvakakosha zvezvisikwa zvezvisikwa izvo zvisikwa zvinosarudzwa uye izvo zvisikwa zvose kana zviitiko zvinowanikwa, kuitira kuti chimwe nechimwe chinogona kusiyaniswa nemhando dzayo kubva kune imwe neimwe yezvinhu zvitatu, uye kuitira kuti rudzi rwose inogona kuzivikanwa nehutsika uye basa, zvisinei nekubatanidza nekuita semasimba emasikirwo kana mukugadzirwa kwemumwe muviri.
Elemental, An: iri chikwata chechisikiro chinoratidzika sechimwe chezvinhu zvemoto, kana zvemhepo, kana yemvura, kana yepasi, mumwe nomumwe; kana semunhu mumwechete wechimwe chinhu muhukuru hwezvimwe zvikamu zvezvisikwa uye kutonga iyo yakawanda yezvikamu.
Elementals, Lower: ndeyezvikamu zvina zvemoto, mhepo, mvura, uye mashizha epasi, pano anonzi causal, portal, chimiro, uye mapurani akaumbwa. Ndizvo zvinokonzera, kuchinja, varindi, uye kuonekwa kwezvinhu zvose muzvisikwa izvo
inouya kuvapo, izvo zvinoshandiswa, izvo zvinosara kwekanguva, uye izvo zvichatsva uye zvichange zvichinyangarika, kuti zvive zvakare zvakasikwa kuva zvimwe kuonekwa.
Elementals, Upper: zvinhu zvemoto, mhepo, mvura, uye pasi zvisikwa, izvo zvavakasikwa neIntelligences yezvinyorwa, kana neTurune Selves yakakwana, iyo inoumba hurumende yenyika. Pamusoro pavo
izvo zvisikwa hazvingazivi uye hazvigoni kuita chinhu. Havasi ivo pachavo chaivo zvisikwa zvakasikwa sezvisikwa zvakasikwa, mukugadzirwa kwekugadzirwa. Izvo zvakasikwa kunze kwechimiro chisina kuonekwa chezvinhu izvi kuburikidza nekufunga, uye kupindura zvakakwana kune mafungiro eVaSunune Selves vanovatungamirira mune zvavanofanira kuita. Ndivo vanopomera mutemo, izvo zvisingaverengeki vanamwari kana mamwe masimba angakunda. Muzvitendero kana tsika dzinogona kutaurwa sevatumwa vakuru, vatumwa, kana vatumwa. Vanoita nekurongeka zvakananga kweHurumende yenyika, pasina ruzivo rwevanhu, kunyange zvazvo rimwe kana kupfuura rinogona kuonekwa kupa kupa murairo kumunhu, kana kuti kuunza kuchinja munyaya dzevanhu.
Emotion: ndiko kumutsa uye kuratidza kwechido nemashoko kana maitiro, mukupindura kumanzwiro ekurwadziwa kana kufara nemanzwiro.
Godo: ndiko kunzwa kwekuda-kuda kana kusuruvara kunorwadza kune munhu ari kana kuti ane izvo zvinoda nzara kuva kana kuva nazvo.
Kuenzana muMunhu: ndeyekuti munhu wese ane kodzero ane kodzero yekufunga, kuva, kuda, kuita, uye kuva, izvo zvaanogona kuva, kuda, kuita uye kuva nazvo, pasina simba, kudzvinyirira kana kudzivisa, kusvika pamwero kuti haaedzi
kudzivirira mumwe kubva kumabvumo akafanana.
Eternal, The: ndiyo iyo isingabatanidzwi nenguva, iyo isina maturo uye isingagumi, mukati nokunopfuura nguva uye mazwi, asingatarisirwi, asingakwanisi kana kutaridzika nenguva uye pfungwa sekupfuura, ikozvino, kana ramangwana; kuti mune izvo zvinhu zvinozivikanwa kuti zvakafanana nezvozvo, uye izvo zvisingagoni kuonekwa sevasati vasiri.
Experience: iyo inofanirwa nechiito, chinangwa kana chiitiko chinobudiswa kuburikidza nemanzwiro ekuzvinzwa mumuviri, uye kupindura semhinduro yekunzwa sekurwadziwa kana kufara, mufaro kana kuchema, kana chero humwe humwe huro kana manzwiro. Chiitiko ichocho chinonyanya kukosha chekushandiswa kwemuiti uye kudzidzisa, kuti muiti anogona kubvisa kudzidza kubva pane zvakaitika.
Exteriorization, An: ndicho chiito, chinangwa kana chiitiko icho chaiva chimiro chemuviri mupfungwa asati agadziriswa sechiito, chinangwa kana chiitiko pane ndege chaiyo, sechiitiko chemuviri.
Chokwadi: ndezvechokwadi chezvinangwa kana kuti zviito zvekutonga, zvinhu kana zviitiko muhurumende kana kuti ndege yavanoona kana kuti inocherechedza, sezviri pachena uye ichiedzwa nemafungiro, kana seinofungidzirwa uye kutongwa nemhaka. Ichokwadi ndeyemhando ina: chokwadi chepanyama, chokwadi chepfungwa, pfungwa dzepfungwa, uye nhete.
Kutenda: Ndiyo mafungiro emuiti anoita kuti kuve nesimba pane fomu-kufema nekuda kwekutenda uye kuvimba pasina pasina mubvunzo. Kutenda kunobva kune muiti.
Nhema: ishoko sezvokwadi yezvinotendwa kuti hazvisi zvenhema, kana kuramba kwezvinofungwa kuti ndezvechokwadi.
Mukurumbira, (Zita): iri kushandura mashizha ekuona kwezvinhu zvisingadikanwi zveunhu, izvo zvinoshandiswa sevanescent semafuta.
Kutya: ndiko kunzwa kwekunetseka kana kuitika kwekuuya kwekutambudzika mupfungwa kana mupfungwa kana mumuviri.
kunzwa: ndeyeiye unozviziva mumuviri unonzwa; iyo inonzwa muviri, asi haitauri uye inozvisiyanisa pachayo sekunzwa, kubva mumuviri uye manzwiro ayo anonzwa; iyo ndiyo chikamu chekusimudzira chemuiti-mu-mu-muviri, rutivi rwunoita rwechido icho chiri chido.
Kunzwa, Kuvepo kwega: rusununguko rwayo kubva kutonga nemafungiro emumuviri uye kuzvizadzisa pachako sekunzwisisa kufara.
Zvokudya: ndeyezvisikwa zvakagadzirwa nemasanganiswa asingaverengeki emakemikari emoto, mhepo, mvura, uye nhengo dzepasi, nokuda kwekugadzirwa kwemakumbo mana nekusimudzira muviri.
Fomu: iyo pfungwa, chimiro, chimiro kana chigadziro chinotungamirira uye maumbirwo uye inogadzirisa mitsara kuhupenyu sekukura; uye mafomu anobata uye mafashoni masangano pakuonekwa sekuonekwa.
Rusununguko: ndiyo mamiriro ezvinhu kana chiitiko chekuchiva-uye-kunzwa kwemuiti apo zvatozvizvidzivirira pachako kubva kune zvakasikwa uye zvinoramba zvisingaverengeki. Rusununguko harurevi kuti munhu anogona kutaura kana kuita zvaanoda, chero kwaanoita. Rusununguko ndechekuti: kuva uye kuda uye kuita nekuita pasina kusungirirwa kune chimwe chinhu kana chinhu chezvinhu zvina; uye, kuti arambe ari, achida, aite, uye ave, asina kuiswa, nekufunga, kune chaanoda kana kuda kana kuita kana kuti. Izvozvo zvinoreva kuti iwe hauna kubatanidzwa mupfungwa kune chero chinhu kana chimwe chinhu chechisikigo, uye kuti iwe hausi kuzozvibatanidza iwe uchifunga. Kusungirirwa kunoreva kusungwa.
basa: iyo ndiyo nzira yekuita inotarisirwa munhu kana chinhu, uye iyo inoitwa nekusarudza, kana nekutarisirwa.
Kubhejera: chinhu chinokanganisa chimwe chete nemhepo yekubhejera, kana chido chinonakidza chisingaperi chekuwana, kukunda mari kana chimwe chinhu chinokosha kuburikidza ne "lucky," ne "kutengesa," nemitambo ye "mukana," pane kuitora kuburikidza nebasa rakatendeseka.
Genius, A: ndeye unoratidza kutanga nekukwanisa kunomusiyanisa kubva kune vamwe mumumunda wekuedza kwake. Zvipo zvake zvizvarwa. Havana kuwanikwa nekudzidza muhupenyu huno. Vaiwana nekufungisisa kukuru uye kushanda mune zvakawanda zvehupenyu hwavo hwekare uye vanoendeswa pamwe naye semugumisiro kubva pane zvakaitika kare. Kusiyanisa maitiro ezvinyorwa kunotangira pamusoro pemafungiro, nzira, uye nzira yakananga yekuratidza unyanzvi hwake. Haana kuvimba nezvedzidziso yeimwe chikoro; iye anofunga nzira itsva uye anoshandisa chero hupi hwepfungwa dzake zvitatu mukuratidza manzwiro ake-uye-chishuvo maererano nemanzwi. Ari kutarisana nenhepfenyuro yezviyeuchidzo zvake zvekare kare mumunda weunyanzvi hwake.
Germ, The Lunar: inobudiswa nehurongwa hwekubereka uye inofanirwa kuberekwa kwemuviri wemunhu, kuva nzvimbo yekuita zvakare. Inonzi lunar nokuti kufamba kwayo kuburikidza nemuviri kwakafanana nezvikamu zvekutsvaira uye kupera kwemwedzi, uye ine ukama kumwedzi. Inotanga kubva mumuviri wepituitary uye inoenderera mberi nayo nzira yakadzika pamwe chete nemitsetse yechipupuri uye chirwere chekudya, ipapo, kana isingadikarwi, inokwira pamutsana kusvika kumusoro. Pamusoro penzira iyo yepasi inounganidza Chiedza chakatumirwa kune zvisikwa, uye chinodzorerwa nechisikiro muzvokudya zvakatorwa mumugadziro wekudya, uye inounganidza Chiedza kubva muropa iro rakadzorerwa nekuzvidzora.
Germ, The Solar: iyo chikamu chemuiti wekuti pakuyaruka ari mumuviri wepituitary uye ane Chiedza chakajeka. Kwemwedzi mitanhatu inoburuka, sezuva, kurutivi rwekumaodzanyemba, kurutivi rworudyi rwemutsipa wepelinha; zvino inoshanduka, pakutanga lumbar vertebra, uye inokwidza kuruboshwe kurutivi rwaro rwokumusoro kwemwedzi mitanhatu kusvikira yasvika pineal body. Pasi parutivi rwekumaodzanyemba uye kuchamhembe kunofamba inotenderera rwonzi rwepelinha, nzira yeupenyu husingaperi. Mwedzi wemwedzi unosimbiswa nguva imwe neimwe iyo inopfuurira mishonga yezuva.
Glamor: ihurumende umo munhu ari kufarirwa nechinhu kana chinhu kuburikidza neshoko, iyo mafungiro anokanda pamusoro pemanzwiro ake-uye-chido, uye iyo inomubata senhapwa, uye zvinomudzivisa kuti asaona kuburikidza nekunakidza, uye kubva pakunzwisisa kuti chinhu sezvazviri chaizvoizvo.
Chiedza: inzvimbo yepfungwa, nekuda kwekunetseka pamusoro pemanzwiro asina kugutsikana nezvido. Mune imwe inogona kuumba mamiriro ezvinhu erima iyo inokwezva pfungwa dzekuora uye kusagadzikana, izvo zvinogona kutungamirira kumabasa ekukuvadza iwe pachako uye
vamwe. Mushonga wekusuwa ndechimwe chikonzero chazvakatemerwa uye chiito chakanaka.
Mwari, A: iyo pfungwa iripo, yakasikwa nemafungo evanhu semumiriri wehukuru hwezvavanonzwa kana kutya; sezvinodiwa nemunhu chero upi zvaanoda kuva, kuda, nekuita.
Hurumende, Self- Kuzvimirira, pachezvako, ndiyo huwandu hwemanzwiro uye zvishuwo zvemuiti anoziva ari mukati memuviri wemunhu uye ndiani anoshanda mumuviri. Hurumende chiremera, manejimendi uye nzira inotongwa nemuviri kana nyika. Kuzvitonga-wega zvinoreva kuti manzwiro uye zvishuwo zvemunhu, kana zvishuwo, kuburikidza nezvaanofarira, kufungira zvishuwo zvekukanganisa muviri, zvinomiswa nekutungamirwa nekutungamirwa nemanzwiro emunhu zvirinani nezvishuwo zvinofunga nekuita nenzira kwayo uye nepfungwa, sechiyero chechiremera kubva mukati, pachinzvimbo chekudzorwa nezvinodiwa nezvisingadiwe pamusoro pezvinhu zvepfungwa, zvinova zviremera zvinobva kunze kwemuviri.
Nyasha: mutsa une rudo nekuda kwevamwe, uye kusununguka kwefungiro uye kunzwa kunoratidzirwa muhukama hwehukama pakuumba uye kuita.
Ukuru: iri mumwero wekuzvimiririra nechinangwa uye ruzivo muhukama hwake nekubata nevamwe.
Makaro: ndiyo chido chisingadikanwi chekuwana, kuva, nekubata chero chipi zvacho chaunoda.
Ground, Common: rinoshandiswa pano kureva nzvimbo kana muviri pamusoro kana mune izvo zviviri kana zvinopfuura zvinosangana zvekubatana. Nyika ndeyo musangano wevaya vanoita mumitumbi yevanhu kuti vaite pamwe chete nekuda kwezvavanofarira. Muviri wemunhu ndiyo nzvimbo inowanzoitirwa chiito pakati pemuiti uye zvikamu zvezvinhu zvezvisikwa izvo zvinopfuura napo. Saizvozvowo pasi pamusoro penzvimbo inowanikwa iyo pfungwa dzevanhu vose pasi pano dzakanyanyisa sezvirimwa nemhuka dzinokura uye dzinogara panyika, uye izvo zvinonzi exteriorizations mumhando dzechido uye manzwiro evanhu.
Habit: iyo inotaura neshoko kana chiito chekufungidzira pane fomu-kufema nokufunga. Kudzokorora kwemashoko asinganzwisisiki kana zviito zvinowanzokonzera kusagadzikana kweiye munhu uye weomuteereri, izvo zvingangowedzera kuwedzerwa kunze kwekuti chikonzero chibviswa. Izvi zvinogona kuitwa nekusaenderera mberi nekufunga kunokonzera tsika, kana nekufunga kwakanaka kune: "rega" uye "usadzokorora" -kunge shoko kana chiito chiri. Iko mafungiro akanaka nemafungiro epfungwa anopesana netsika inozopedza mafungiro pane fomu-kufema, uye saizvozvo kudzivirira kudzokorora kwayo.
Horo Yokutongwa: iri mushure mekufa kweropa umo muiti anowana. Izvo zvinoratidzika kuva neholo yechiedza ndiyo chaiyo inonzi Conscious Light. Muiti wacho anoshamiswa uye anotya uye achapukunyuka, chero kupi zvako, kana zvichikwanisa; asi
hazvigoni. Iyo inoziva chimiro icho, pasi pano, chakatenda kuva chaicho, zvisinei kuti hachisi mufananidzo iwoyo; chimiro chacho mweya-kufema usina muviri wenyama. Mukati kana pafomu iyi yekufema, Chiedza cheChinhu Chidiki, Chokwadi, chinoita kuti
muiti anoziva zvose zvaaifunga, uye zvezviito zvazvaiita pairi mumuviri waro panyika. Muiti anoziva izvi sezvavari, seChiedza cheChenjeri, Chokwadi, chinoratidza kuti ivo, uye muiti wacho pachawo anovatonga, uye
kutonga kunoita kuti zvive nekodzero kwavari semabasa emunguva yemberi panyika.
Mufaro: Ndizvo zvinokonzerwa nemunhu anofunga uye anoita maererano nezvakarurama-uye-chikonzero, uye chido chekuda-uye-kunzwa apo vari muhutano hwakabatana uye vane
Kuporesa nokuisa Maoko: Kuti abatsire murwere, muporesi anofanira kunzwisisa kuti ndiye chido chekuda chinoshandiswa nechisikiro kuitira chinangwa chekugadzirisa zvakare kurongeka kwehupenyu hwave hwakadziviswa
kana kupindira mukati momuviri wemurwere. Izvi zvinogona kuporeswa nekuisa zvanza zvemaoko ake ari kurudyi uye kuruboshwe mberi uye shure kwemukoko, uyezve kune dzimwe humwe hutano hunogona, mumhino, mimba, uye
pelvis. Mukudaro kuita muviri wekuporesa ndiyo inoshandiswa iyo magetsi uye magnetic simba achiyerera uye akaisa mukugadzirisa mishonga yemurwere nokuda kwekuita kwayo zvakarongeka nemasikirwo. Mupoti anofanira kugara
kutsika zvakanaka-kuda, pasina kufunga kwekubhadhara kana kuwana.
Kuporesa, Mangariro: iri kuedza kuporesa zvirwere zvepanyama nemaitiro ekufunga. Kune zvikoro zvizhinji zvinoedza kudzidzisa nekuita kurapwa kwezvirwere nekushanda kwepfungwa, sekuda kwekuti kune chirwere, kana nekusimbisa hutano
panzvimbo yechirwere, kana nemunyengetero, kana nekudzokorora mazwi kana mazwi, kana nechinangwa chipi zvacho chekufunga. Kufunga nemanzwiro zvinobata muviri, netariro, mufaro, mufaro, kusuruvara, dambudziko, kutya. Kurapa kwechirwere chaicho kunogona kuva
inokanganiswa nekuenzanisa kwepfungwa yechirwere chiri exteriorization. Nokubvisa chikonzero, chirwere chinonyangarika. Kuramba chirwere ndeyekunyepedzera. Dai pasina chirwere paisazova nekurambwa kwacho. Iko kune hutano, hapana chinhu chinowanikwa nekusimbisa izvo zvatove.
Kunzwa: iyo inobatanidza mhepo, ichiita senhume kumhepo yezvinhu zvechisikwa mumuviri womunhu. Kunzwa ndiyo nzira inoshandiswa nemhepo yezvinhu zvakasikwa uye yekufema mukati momuviri kutaurirana. Kunzwa ichinhu chechimiro chinopfuurira uye chinorondedzera uye chinogadzirisa nhengo dzomuviri wekupemha, uye inoshanda sekunzwa kuburikidza nehukama hwakanaka hwezvikamu zvayo.
Denga: ndiyo iyo nguva uye nguva yerufaro, kwete yekugadziriswa nenguva yepanyika yematambudziko, uye iyo inoratidzika isina kutanga. Icho chinoumbwa nemafungiro ese nemafungiro ehupenyu pasi pano, uko pasina kufunga kwekutambudzika kana
kusagadzikana kunogona kupinda, nokuti izvi sezviyeuchidzo zvakabviswa kubva pomufema-fomu munguva ye purgatorial. Denga rinotanga chaizvo apo muiti ari kugadzirira uye anotora mafomu. Izvi hazviratidzika sekutanga; zvakaita sokuti zvave zvakadaro. Denga rinoguma apo muiti akafamba uye akapedza pfungwa dzakanaka uye mabasa akanaka ayo aive nawo uye akazviita paaiva panyika. Ipapo maziso ekuona uye kunzwa uye kunwa uye kunhuhwira zvinosunungurwa kubva mufomu-fomu, uye kupinda muzvinhu zvavari ivo kutaura mumuviri; chikamu chemuiti chinodzokera mukati mawo, chivande, uko chiripo kusvikira kusvika kwaro kuchiuya kwekuzovapozvezve panyika.
Hell: iri mamiriro ega ega kana mamiriro ekutambura, ekutambudzwa, kwete nhau yemunharaunda. Kutambura kana kutambudzika kune zvikamu zvekunzwa nekuchiva izvo zvakaparadzana kubva uye zvakasunungurwa nemuiti munharaunda yaro kuburikidza ne metempsychosis. Kutambura ndiko nokuti manzwiro uye zvishuwo hazvina nzira kana kuti izvo zvavanogona kudzikinurwa nazvo, kana kuti kuwana izvo zvavanoshungurudza nazvo, kuda uye kuda. Icho ndiko kutambudzika kwavo -gehena. Kunyange zvazvo vari mumuviri wenyama pasi pano, maitiro akanaka uye akaipa akaipa nevechido zvaiva nenguva yavo yekufara uye kushungurudzika kwakange kwakabatana mukati mehupenyu huri pasi pano. Asi panguva yemetempsychosis, chirongwa che purgatori chinoparadzanisa uipi kubva kune hwakanaka; vakanaka vanoenderera mberi kunakidzwa nerufaro rwavo rusina kubvumirwa mu "denga," uye zvakaipa zvinoramba zviri mune izvo zvino kutambudzika kwekutambura, uko manzwiro nemanzwiro evanhu vanogona kuva uye anofadzwa, kuitira kuti kana vadzoka zvakare, vanogona, kana vakasarudza, vadzivisa zvakaipa uye vabatsirwe kune vakanaka. Denga negehena ndezvekuwana, asi kwete yekudzidza. Pasi ndiyo nzvimbo yekudzidza kubva pane zvakaitika, nokuti pasi ndiyo nzvimbo yekufunga nekudzidza. Mukati mushure mekufa pfungwa nemabasa zvakadai sehurota zvakararama zvakare, asi hapana chikonzero kana kufunga mutsva.
Heredity: inowanzo kunzwisiswa kureva kuti hunhu uye hunhu hunhu, maficha uye maficha emadzitateguru ako anopfuudzwa uye kugarwa nhaka nemunhu iyeye. Ehezve, izvi zvinofanirwa kuve zvechokwadi kune imwe nhanho nekuda kwehukama hweropa nemhuri. Asi chokwadi chakakosha hachipiwi nzvimbo. Ndokunge, kuti kunzwa-uye-chishuwo chemuiti asingafi zvinogara mumuviri wemunhu mushure mekuzvarwa kwake uye zvinounza mafungiro nehunhu nazvo. Dzinza, kubereka, nharaunda nemasangano akakosha, asi zvinoenderana nehunhu hwayo nesimba mushandi anozvisiyanisa neizvi. Iko kufema-chimiro chemuiti kunokonzera kubata; fomu rinopa izvo zvinoumbwa nemunyori uye mweya unovakira muchimiro chayo izvo zvakashongedzwa naamai, uye mushure mekuzvarwa fomu yekufema inoramba ichivaka nekuchengetedza yayo fomu
kuburikidza nezvikamu zvose zvekukura nezera. Muiti mumutumbi mumwe nomumwe wemunhu pane nguva. Iko mafomu-kufema kunounza nhoroondo yaro, iyo inopesana nezvose zvakazivikanwa nhoroondo.
Kutendeseka: iyo chido chokufunga uye kuona zvinhu seChiedza Chinoyevedza mukufunga chinoratidza zvinhu izvi sezvavari chaizvo uye zvino kubata zvinhu izvo seChiedza cheKunyatso chinoratidza kuti chinofanira kutarisirwa.
Tariro: ndiyo inogona kugadzirisa chiedza chiri muiti muzvinhu zvose zvayo kutenderera kuburikidza nerenje renyika; inotungamirira kana inokurudzira mune zvakanaka kana kurwara maererano nehutano hwemuiti; iyo nguva dzose isina chokwadi nezvezvinhu zvemazwi, asi ndeyechokwadi kana chikonzero chichiraira.
Munhu, A: iri kuumbwa kwezvikamu zvezvinhu zvina zvezvisikwa zvakaumbwa uye zvakarongwa semasero uye nhengo muzvikamu zvina zvinomiririrwa nemanzwi mana ekuona, kunzwa, kuravira, uye kunhuwa, uye zvinongorongedzerwa uye zvinoshandiswa nefomu-fomu, mutungamiriri mukuru yemunhu muviri kana muviri wemukadzi; uye, mune chikamu chemuiti anopinda uye anogara zvakare, uye anoita kuti mhuka ive munhu.
Vanhu, Zvikoro zvina zve: Nokufunga vanhu vanozviparadzanisa pachavo mumakira mana. Irosi yeklasi mune imwe neimwe, iye akazviisa pachake nekufunga kwake; iye acharambira mairi chero bedzi achifunga sezvaanoita; iye achazvibvisa kubva mairi uye ozviisa mune chimwe chezvimwe zvezvikoro zvina paanenge achiita kufunga kunomupinza mukirasi yaachazove yake. Zvidzidzo zvina ndezvi: vashandi, vatengesi, vanofunga, the
knowers. Mushandi anofunga kugutsa zvido zvemuviri wake, kuda uye kunyaradza kwemuviri wake, uye kuvaraidzwa kana kufadza kwemazwi emuviri wake. Mutengesi anofunga kugutsa chido chake chekuwana, kutenga kana kutengesa kana kutengesa pfuma, kuwana zvinhu, kuva nepfuma. Munhu anofunga anofunga kugutsa chido chake chekufunga, kufungidzira, kuwana, mumabasa kana hupenzi kana sciences, uye kukunda mukudzidza uye kubudirira. Muzivi anofunga kugutsa chido chekuziva zvikonzero zvezvinhu: kuziva ani uye chii uye kupi uye nguva uye sei uye sei uye nei, uye kupa kune vamwe zvaanoziva iye amene.
Humanity: ndiyo inowanzobva uye kushamwaridzana kwevanhu vose vasingasviki uye vasingafi mumitumbi yevanhu, uye inzwi ruremekedzo mumunhu wehukama ihwohwo.
Hypnosis, Self-: ndezvekuzvida kuzviisa mumamiriro ekurara zvakakomba nekunyengedza uye kuzvidzora iwe pachako. Chinangwa chokuzvifungidzira kunofanira kunge chiri kuzvidzora. Mukuzvifungidzira muiti anoita sezvinoita munhu anonzi hypnotist uye zvakare semusoro. Anofunga zvaanoda kuita izvo asingagoni kuita. Zvadaro, achiita semunhu anonzi hypnotist, anonyatsozvirayira kuti abudise mirairo iyi kwaari pachake paanenge akarara. Zvadaro, nokufungidzira, anozviisa kurara nokuzviudza kuti acharara, uye pakupedzisira iye avete. Mukufunga kwekurara anozviraira pachake kuita zvinhu munguva uye nzvimbo. Paanenge azviraira pachake, anodzokera kumamiriro ekumutsa. Muka, iye anoita sezvaanodanwa kuti aite. Mune tsika iyi mumwe munhu haafaniri kuremekedza iye pachake, zvimwe angazovhiringidzika uye achakundikana kuzvidzora.
Hypnotism kana Hypnosis: ihwo hutano hwekurara hunoburitswa pane imwe nyaya uyo anotambudzika kuti aite mari. Nyaya iyi kana kuti inozviita seisina kunaka kune hypnotist, uyo anofanirwa kuva akanaka. Nyaya yacho inopa iye
kunzwa-uye-chido kumanzwiro-uye-chishuvo chei hypnotist uye nokudaro achipa kuzvipa kwekufema-fomu uye kushandiswa kwemashoko ake mana. Ikokunyengeri inofungidzira nyaya yacho nekushandisa chero ipi zvayo kana yese yeyo magetsi-maginiti nesimba kuburikidza nemeso kana inzwi uye maoko ehurukuro yake uye nekudzokorora zvakare kumuudza kuti acharara uye kuti akarara. Kuzviisa pasi peshoko rekurara nyaya yacho inorara. Akazviisa pasi, wake
fomu-kufema uye manzwi ake mana kune kutonga kwei hypnotist, nyaya yacho iri mumamiriro ezvinhu ekuteerera mirairo uye kuita chero chii chinorayirwa ne hypnotist asingazivi zvaari kuita zvechokwadi kunze kwekuti haagoni kuitwa kuti aite mhosva kana kuita chiito chisina kukanganisa kunze kwekuti aizomira mukumuka kwake saka ita kana kuita. Munhu anonyanya kufungidzira anotora mhaka yakakura apo anonyengedza chero ani zvake. Nyaya iyi inofanira kutambura kuburikidza nenguva yakareba yekuzvibvumira kutungamirirwa nemumwe. Mumwe nomumwe anofanira kudzidzira kuzvidzora kusvikira iye achizvidzora. Ipapo haazogadziri mumwe kana kubvumira mumwe kuti amutonge.
Hypnotist, A: ndeye uyo anoda, kufungidzira uye kuzvidzora uye uyo anobudirira mukufungidzira vateereri vake uye kubudisa zvinhu zvinoshamisa zvehupnotism kusvika paanenge achiita izvi nekunzwisisa.
"Ini" Sezvamunoziva, Ichokwadi: ndiko kunzwa kwekuvapo kwechokwadi chaiye weI-ness yeanomuziva. I-ness i-self-kuzviziva pachake unhu hwemuzivi, husina chinangwa uye asina kutanga kana kuguma muHasingaperi.
Kufunga nemafungiro emumuviri uye kunzwa kunzwa kuvapo kwaro chaiye, kunonyengedza muiti mukutenda kuti kune imwechete imwe chete nemuviri nemanzwi.
Ideal: ndiwo mhedziso yezvakanakisisa kuti munhu afunge, kuva, kuita, kana kuti ave.
Kuzivikanwa, Ndeye: ndiko kunzwa kwekuzivikanwa mumuviri wako, kunzwa kwako pachako kwakafanana iye zvino sezvaiva munguva yakapfuura, uye kunzwa kwakadaro kuva munguva yemberi. Manzwiro ako ega anodikanwa uye anodikanwa mumutadzi kuburikidza nemuviri, nekuda kwekusagadzikana kwaro kubva mukuzivikanwa kwemuzivi weTunune Self.
I-ness: ihwo husingafadzi, husingarevi, uye hunoramba huchitsinhanisa hutatu hweTunune Self muHasingaperi; zvisingaenzaniswi, asi kuvapo kwavo kunogonesa kunzwa mupfungwa yemunhu kufunga uye kunzwa uye kutaura zvega se "I" uye kuziva chimiro chisingachinji muupenyu hwose hunochinja hupenyu hwomuviri wayo.
Kuziva: iri rima repfungwa, iyo maitiro ayo muiti-mu-mu-muviri, asina ruzivo rwega uye rwehukodzero uye chikonzero. Iyo manzwiro nemanzwiro emanzwiro ayo uye chido zvakapedza mafungiro ake uye anoziva.
Pasina Chiedza Chinobva kwavari chiri murima. Haikwanise kuzvisiyanisa pachavo kubva mumanzwi uye muviri urimo.
Illusion: Kukanganisa kwemafashoni kana kuonekwa kwechokwadi, sechisimba kuva nzvimbo kana nzvimbo iyo inoratidzira, kana kuti nzvimbo iri kure kuva murume; chero chinhu chinonyengedza pfungwa uye chinokanganisa kukanganisa.
Kufungidzira: ndiyo mamiriro ayo mafungiro ekunzwa-uye-chido anopa mafomu panyaya.
Kufungidzira, Zvisikwa-: ndiyo inofambidzana uye isingadzorwiki kutamba kwemazwi anowanikwa ikozvino nemangariro; kubatanidza kana kubatanidzwa kwemifananidzo yakaitwa pafema-fomu nemazwi neyezviyeuchidzo zvemaonero akafanana, uye iyo kusanganiswa inomiririra zviitiko zvepanyika. Aya maitiro anosimba anomanikidzira, uye anogona kukanganisa kufunga.
Incubus: iyo fomu yemurume isingaoneki iri kutsvaga kufungidzira kana kuva neukama hwepabonde nemukadzi panguva yehope. Incubi ndeyemhando mbiri, uye kune marudzi akasiyana siyana. Chimwe chinonyanya kukosha ndechokuita zvepabonde, imwe yacho inowanzoedza kuvhara mukadzi, sezvinoitwa inonzi nightmare, iyo inoratidzika kurota ingangodaro inokonzerwa nechingestion kana zvimwe zvinetso zvepanyama. Rudzi rwekudzivirira runoenderana nemafungiro ekufunga uye nzira yekuita kwevete muhupenyu hwake hwokumuka. Chimiro chekudzivirira, kana chikaonekwa, chichibva kune chengirozi kana mwari, kune dhiyabhorosi kana bukandara kana boar.
Masikirwo muImhuka: ndiyo simba rekufambisa rinobva kumunhu riri mumhuka iyoyo. Chiedza kubva kumunhu, chakasungwa nechido, ndicho chinotungamira kana kutungamirira mhuka mumabasa ayo, maererano nemanzwi mana ezvakasikwa.
Intelligence: ndiyo iyo iyo Intelligences yose yakabatana uye iyo inosiyanisa uye inorondedzera uye inosimbisa ukama hwezvinhu zvose kune umwe neumwe vanoziva kuti vanoziva; uye, kuburikidza nazvo ivo, uye uye mumagariro avo akasiyana mukuziva, kufadza, kusiyanisa uye kurondedzera zvikamu zvose kana mapoka ezvikamu muhukama hwavo kune umwe neumwe.
Intelligence, An: iri yepamusoro-soro yezvikwata muZvirokwazvo, inotaura neTunune Self yemunhu ne Supreme Intelligence kuburikidza neChiedza Chayo chekuziva, iyo iyo inopa munhu uye inoita kuti iye afunge.
Intelligence, Faculties of an: Pano pane zvinomwe: chiedza uye ini-ndine simba rinotonga nzvimbo yemoto; nguva uye zvikonzero zvinotungamira mamiriro emhepo; mufananidzo uye mashizha masikati munharaunda yemvura; uye hurumende inotarisa munharaunda yepasi. Nhengo imwe neimwe ine basa rayo pachake uye simba uye chinangwa uye inoparadzaniswa zvakasiyana nevamwe. Chiremera chechiedza chinounza chiedza kunyika dzose kuburikidza neChitubu Chavo Self; nguva
sangano ndiyo iyo inokonzera mutemo uye kuchinja mune zvisikwa zvezvisikwa muhukama hwavo kune umwe neumwe. Chimiro chechifananidzo chinofadza pfungwa ye fomu panyaya. Sangano rinotarisa rinotarisira mamwe mazano pamusoro pezvazviri
inotungamirirwa. Dhigirii rima rinopesana kana kupa simba kune rimwe ruzivo. Chinangwa chechikonzero chinopa chinangwa uye chinotungamirira kufunga. I-i-faculty ndiyo chaiyo yoga yeAngelligence. Simba rekutarisa ndiro chete rinosangana nemuviri kuburikidza nemuiti mumuviri.
Intelligence, The Supreme: ndiyo muganhu uye chigumisiro chepamusoro kuti unyanzvi hunogona kupfuurira mberi mukuziva sechikwata. The Supreme Intelligence inomiririra uye inonzwisisa zvimwe zvose zvinonzi Intelligences munharaunda. Hausi mutongi weimwe Intelligences, nokuti Intelligences inoziva mutemo wose; ivo mutemo uye humwe Uchenjeri hunozvitonga pachahwo uye hunofunga uye hunoita maererano nemitemo yepasi rose. Asi Supreme Intelligence ine mutungamiri wayo uye mutariri
nzvimbo dzose uye nyika uye anoziva vanamwari uye zvisikwa zvose zvakasikwa.
Intuition: ndiyo dzidziso, dzidzo kubva mukati; iyo zivo yakananga inouya kuburikidza nechinangwa kumuiti. Hazvive nehanya nekutengeserana kana nhau dzematangariro, asi nemibvunzo yemitemo kana mazano efilosofi, uye haashoma. Kana muiti wacho aigona kuzarura kukurukurirana nemuzivi waro, zvinogona kunge zvine ruzivo pane chero nyaya.
Istence: ndiko kunzwa-uye-kuda kwemuiti, unoziva chokwadi chaicho pachako, sezvacho chairo; kwete sehupenyu, kwete mukuvapo, asi muhutano hwahwo hunokonzerwa nekuzvidzivirira kwaro pachako pachako kubva pamanyengeri ezvakasikwa.
Godo: ndeyekutsamwa uye jaundiced kutya kwekusawana kana kuva nekodzero dzemunhu mune rudo kana zvido zveumwe kana zvevamwe.
Mufaro: ndiko kutaura kwekunzwa uye chido cheumwe mavari kuvimba.
Kururamisira:ndicho chiito chezivo maererano nehurukuro iri pasi pekufungidzirwa, uye mukutongwa kunoziviswa uye yakatemerwa semutemo.
Karma: ndiyo migumisiro yezviito uye kugadzirisa kwepfungwa uye chido.
Knower, The: ndiyo iyo yeTunune Self iyo ine uye ine zivo chaiye uye yechokwadi, yehu uye munguva uye yekusingaperi.
Zivo ndeyeMarudzi maviri: chaicho kana kuzviziva-uye ruzivo-ruzivo rwevanhu. Kuziva zivo yeTunune Self hakusingaperi uye hakugoneki uye kunowanzozivikanwa kune vanoziva veSelune yose Selves. Hazvisi zvinoenderana nemafungiro kunyange zvinosanganisira zvose zvakaitika munyika; izvi zvinoshungurudza zvinhu zvose kubva pane zvishoma zvakagadzirirwa unit of nature kusvika kune zvose-kuziva Triune Self yenyika yose munguva yose muYekusingaperi. Iko ichokwadi chaiyo uye isingashanduki panguva imwe chete inowanika mumashoko mashoma uye seyinye yakakwana uye yakakwana zvakakwana.
Sense-ruzivo, sayenzi, kana ruzivo rwevanhu, ndiyo inowanikwa uye yakagadziriswa yakawanda yezvakasikwa zvezvakasikwa zvakaonekwa semitemo yechisikigo, kana inowanikwa nevanoita kuburikidza nemafungiro avo asina kusimbiswa uye miviri isina kukwana. Uye zivo nemitemo yemitemo inofanira kuchinjwa nguva nenguva.
Zivo yoMuiti: ndicho chinangwa chemuiti wekudzidza nekufunga. Chiedza chakasunungurwa kubva pazvibatanidzi zvadzo uye zvakadzoserwa kumhepo yakanyarara, mukuenzanisa kwepfungwa dzayo, haina kushamwaridzana uye isingatauriki, uye naizvozvo ruzivo; haisi munhu "ruzivo."
Zivo yeMufungiro weTatuune Self: inosanganisira ruzivo rwose pamusoro pekutonga kwemutemo uye kururamisira kune vanoita, uye muhukama hwevadzidzisi kune vamwe vanoita mumitumbi yevanhu, kuburikidza nevanofunga.
Vose vanofunga vanoziva mutemo. Vanogara vachibvumirana nemumwe wavo uye nevadzidzisi vavo mukugadzirisa kwekupedzisira kune avo vanoita mumitumbi yevanhu. Ruzivo rwavo rwemutemo uye ruramisiro rinomisa kusava nechokwadi uye kunodzivirira mukana wekusarura. Muiti mumitumbi yose yemunhu anowana mugumo waro sezvazvinoita. Ndiko, mutemo uye kururamisira.
Zivo yeChinoziva cheMutatu weMweya, Self-Knowledge: inosanganisira uye inobatanidza zvinhu zvose mumarudzi mana. Sezvo uzvokwadi ihwo ruzivo, uye se-ini-ness iyo inoratidza uye ndeyekuzivikanwa kwezivo. Yakashanda iyo
kudzidzira kuzvinhu zvakasikwa sechimiro chechimiro. Ikoko kwaive ichiziva as basa rayo rinopfurikidza muzvikamu zvose zvemhando yemhando yenguva. Apo yakazova Triune Self mu Kuzviziva-Kujeka kweItelligence muHasingaperi, zvose
basa iro raive richibudirira pakuziva munguva pakarepo rinowanika, risingagumi nenguva, muYekusingaperi. Iyo I-ness yezivo inoratidza basa rimwe nerimwe uye ndiro iyo iyo iyo unit yaiziva, uye kuzviziva kwemuzive unoziva uye ndiko kuziva kweumwe neumwe wakadaro basa zvakasiyana, sekupfuura kwenguva, uye vose pamwe chete varipo muHasingaperi. Idzi ruzivo runotaurirwa kune anofungisisa nemafungiro e-I-ness uye kuzvidzora, uye inogona kuwanika kune muiti sehana mune zvakanaka, uye sekutaura muchikonzero.
Zivo, Noetic (Nyika Yezivo): inoumbwa neyeetic atmospheres yevose vanoziva vaTurune Selves. Ikoko ruzivo rwose rweMunharaunda yose yeTunune inowanika uye pamushandi wevamwe vanoziva.
Mutemo: iri chirevo chekushanda, chakaitwa nemafungiro nemaitiro emuiti wayo kana vanoita, uye kune avo vakanyoresa vakasungwa.
Mutemo Wezvisikwa, A: ndicho chiito kana basa reyuniti iyo inoziva seyo inoshanda chete.
Mutemo Wekufunga, The: ndeyekuti chinhu chose chiri pamba penyama ndechokutsvaga kwepfungwa inofanirwa kuve yakanyatsogadziriswa naiye akaiita iyo, maererano nebasa rake uye panguva yekubatanidzwa kwemazuva, mamiriro ezvinhu
Mutemo Wekufunga, Kuparadzwa. Agents of the: Munhu mumwe nomumwe inhengo yezvakanaka kana yehuipi nechinangwa chake muupenyu uye nezvaanofunga uye zvaanoita. Nezvaanofunga uye zvaanoita, mumwe anozvibatanidza pachake kuti ashandiswe nevamwe. Vanhu havagoni kushandiswa kana kukamanikidzwa kuti vaite zvinopesana nezvinangwa zvavo zvemukati, kunze kwekuti vakazvigadzirira nemafungiro avo nemabasa. Zvadaro vanofurirwa kuita kana kubvumira nevamwe vanhu, kunyanya kana vasina
chinangwa chaicho muupenyu. Vaya vane chinangwa ndivowo zvigadzirwa, nokuti, chero chinangwa, chichakwaniswa kune chakanaka kana chakaipa neHurumende yenyika nevanonyatsoziva mutemo.
Kudzidza: ndicho chinangwa chechiitiko chinobviswa pane zvakaitika kuburikidza nekufunga, kuitira kuti Chiedza chinogona kusunungurwa uye icho chiitiko hachifaniri kudzokororwa. Kudzidza kune marudzi maviri: pfungwa-yekudzidza sechiitiko, kuedza, kuona, nekunyora kwezvinhu izvi sezviyeuchidzo pamusoro pezvisikwa; uye, kuita-kudzidza semugumisiro wekufunga pachako sekunzwa-uye-chido uye zvehukama hwavo. Zvinyorwa zvekuyeuka zvinogona kupedzisa kuburikidza nehupenyu hwemuviri asi hucharasikirwa mushure mekufa. Zvinoitwa nemuiti pamusoro payo sezvo zvakasiyana nemuviri hazvisi kurasikirwa; izvo zvichange zvichizove nemuiti kuburikidza nehupenyu hwayo pasi pano sezivo yaro.
Murevi wenhema, A: ndiyo anotaura sezvokwadi zvaanoziva kuti hazvisi izvo, zvisiri zvechokwadi.
Rusununguko: kudzivirirwa kubva mujeri kana varanda, uye kodzero yekuti mumwe aite sezvaanoda, chero bedzi munhu asingatongopindi kune imwe yakakodzerwa kodzero uye sarudzo.
Upenyu: iri chikwata chekukura, mutakuri wechiedza kuburikidza nefomu. Upenyu hunoita sendimi pakati pepamusoro uye pasi apa, kuunza mukana wekupinda mukudhura nekugadzirisa nekugadzirisa zvakakwana mukugadziridzwa. Mune mbeu imwe neimwe pane chikwata chehupenyu. Mumunhu ndiyo mweya-fomu.
upenyuKumunhu Anonzwisisa Kunzwisisa): iri kunyanya kana zvishoma kwemahombekombe, zvinoratidzika sechokwadi asi zvisingazivikanwi zvitsva zvenguva pfupi kana kwenguva yakareba, zvichiitika kana zvishoma uye zvakajeka zviitiko-fantasmagoria.
Chiedza: Ndicho chinoita kuti zvinhu zvioneke, asi izvo zvisingagoni kuonekwa pachako. Icho chinoumbwa nezvikamu zve starlight kana chiedza chezuva kana chiedza chemwedzi kana pasi, kana kuti yekubatanidzwa kana kugadziriswa uye kutaura kweizvi semagetsi kana sekupisa kwemagesi, mvura yevhu kana zvisikwa.
Chiedza, Kusununguka uye Usingawaniki: ndiyo Chiedza cheChenjeri chinopiwa kune Triune Self, iyo muiti-mu-mumuviri anoshandisa mukufunga kwayo. Chiedza chinogoneka ndicho icho icho muiti anotumira kune zvakasikwa nemafungiro ake nemabasa, uye anodzosera uye anoshandisa zvakare uye zvakare. Chiedza chisina kushandiswa ndicho icho icho muiti akadzikinura uye akaita chisingaverengeki, nokuti chakanyatsonzwisisa pfungwa dzaive muchiedza. Chiedza chinoshandiswa chisingawanikeki chinodzorerwa kumunhu ane ruzivo rwemhepo uye chinowanikwa kune ichocho sezivo.
Chiedza, Kuziva: Ndicho Chiedza icho Triune Self inogamuchira kubva kuIntelligence yayo. Hachisi chimiro kana kuratidzirwa nechisikiro, kunyange zvakadaro, kana ichiendeswa kune zvakasikwa uye kushamwaridzana nemasikirwo emasikirwo, zvisikwa zvinoita sezviratidzika
njere, uye inogona kunzi Mwari muzvisikwa. Apo, nokufunga, Chiedza Chinocherechedza chinoshandurwa uye chakabatwa pane chimwe chinhu, zvinoratidza kuti chinhu ichocho chinofanira kunge chakafanana. Icho Chiedza Chiedza naizvozvo Ichokwadi, nokuti Chokwadi chinoratidza zvinhu kuti zvive
sezvavari, vasina rudo kana kusarura, pasina kuvanza kana kunyengera. Zvinhu zvose zvinoziviswa nahwo kana zvashandurwa uye zvichishandiswa pazviri. Asi Chiedza Chinocherechedza chakafukidzwa uye chakavanzika nemafungo apo kunzwa-uye-kuda kuedza
kufunga, saka munhu anoona zvinhu sezvaanenge achida kuvaona, kana mudivi rakashandurwa reChokwadi.
Chiedza Mumuiti, Zvichida: Kana munhu achiita mabasa asingateereri, asingatyi uye anofara nokuti ndiyo mabasa ake, uye kwete nokuti achazobatsire kana kuwana kana kubvisa, ari kuenzanisa pfungwa dzake dzakaita kuti zvive ake mabasa, uye Chiedza chaanosunungura kana pfungwa dzacho dzichimupa mutsva mutsva wemufaro wekusununguka. Iyo inomupa kunzwisisa kwezvinhu uye zvidzidzo zvaasina kunzwisisa kare. Sezvo achienderera mberi kusunungura Chiedza chaakange achengeta akasungwa muzvinhu zvaaida uye achida, anotanga kunzwa uye kunzwisisa chiedza chiripo chiri maari uye chichava chaicho Chiedza Chiedza apo paanova Uchenjeri.
Chiedza Chezvakasikwa: ndiko kupenya sekupenya, kupenya, kupenya kana kupenya kwemasanganiswa ezvisikwa zviumbwa, kuChiedza cheConscious chakatumirwa mune zvakasikwa nevaiti mumiviri yevanhu.
Link Unit, A Breath-: inobata uye inobata zvikamu zvenguva pfupi zvezvinhu zvinopenya, uye ndicho chinongedzo icho mweya unofambidzana neiyo yehupenyu-chinongedzo chikamu chesero yaro.
Link Unit, A Life-: inobata uye inobata zvikamu zvenguva pfupi zvezvinhu zvine mhepo, uye ndicho chinongedzo neicho hupenyu chakabatana nechimiro-chinongedzo uye mweya wekubatanidza-mayunitsi ayo
Link Unit, A Form-: inobata uye inobata zvikamu zvenguva pfupi zvezvinhu zvine mvura, uye yakabatana necell-link uye nehupenyu-chinongedzo mayuniti esero rayo.
Link Unit, A Cell-: inobata uye inobata zvikamu zvenguva pfupi zvechinhu chakasimba, uye icho chakabatana nemamwe masero ari munhengo kana chikamu chemuviri mairi.
"Mweya Wakarasika," A: Icho chinonzi "mweya wakarasika" hausi "mweya" asi chikamu chemuiti chikamu, uye hachigare zvachose, asi kwechinguva chidiki, chakarasika kana kubviswa kubva mukuvapo kwayo zvekare uye zvimwe zvikamu zvemuiti. Izvi zvinoitika kana, mune imwe yezviitiko zviviri, chikamu chevaiti chakatora nguva refu chakaramba chiri muudyire hwakanyanya ndokushandisa Chiedza chakakweretwa kwachiri mukubiridzira nemaune, kuponda, kuparadza, kana hutsinye kune vamwe uye chave muvengi kuvanhu. Ipapo Chiedza chinobviswa uye chikamu chemuiti chinorega kuvazve; inodzokera mumakamuri epasi kutenderera mukuzvitambudza kusvika yazvinetesa yega, uye inogona kuzotangazve pasi pano. Nyaya yechipiri ndeye apo chikamu chemuiti chakaparadza Chiedza kuburikidza nekuzvigutsa mumafaro, makaro, zvinwiwa uye zvinodhaka, uye pakupedzisira chikave chisina kurapika benzi. Zvino chikamu chemuiti icho chinoenda mukamuri muvhu. Ikoko inoramba iriko kusvikira iyo ichibvumidzwa kuenderera mberi nekuvapo kwayo zvekare. Muzviitiko zvese izvi, iyo yekurega basa ndeye kuchengetedzeka kwevamwe, pamwe neyayowo.
Rudo: Is Conscious Sameness kuburikidza nenyika; kune muiti ari mumunhu, iko kunzwa-uye-chishuwo uye seumwe mukati uye sewe pachako uye chishuwo-uye-kunzwa-kwake mukati uye seimwe.
Rudo MuMuiti: ndiyo mamiriro ekubatana kwakabatana uye kudyidzana pakati pekunzwa-uye-chishuwo, umo mumwe nemumwe anonzwa uye achizvishuwira kuve uye ari mukati uye seimwe.
Kureva uye kusavimbika: Chido chekusatendeseka uye kunyepa zvinhu zvakashata zvakashata; vanoenda pamwechete. Iye uyo anosarudza kusavimbika uye kunyepa ndeuyo uyo mushure mezvakaitika kwenguva refu kuburikidza nehupenyu akatadza kuona zvinhu sezvazviri
uye akadudzira zvisizvo zvaakaona. Akanyatsoona mativi evanhu akaipisisa uye akazvishingisa kuti vanhu vese varevi venhema uye havana kutendeseka, uye kuti avo vanowanzotendwa kuva vakatendeseka uye vane chokwadi vakangwara chete kuvhara kusatendeseka kwavo nekuvanza manyepo avo. Mhedziso iyi inounza ruvengo uye kutsiva uye kuzvifarira; uye iye zvino anova muvengi kuvanhu, segororo chairo kana seane njere
uye rongera mazano pamusoro pevamwe kuti ubatsirwe. Zvisinei hazvo kutuka kukuru kune iyo nyika kungave, mifungo yake semagumo ake inozopedzisira yamuzarurira kunyika nekuno kwaari. Iye mukufamba kwenguva achadzidza kuti kuvimbika uye kutaura chokwadi mukufunga nezviito zvinoratidza nzira yekuZviziva.
Malice:iko kubatirwa nemweya wekusada-kuita uye chinangwa chakaipa chekukuvadza, kukonzera kutambura; muvengi kune zvakanaka-kuda uye kuita chaiko.
Mitiro: Tsika dzakanaka dzinozvarwa pahunhu hwemuiti; zvakagadzirwa, kwete kubatanidzwa. Kukwirisa kwepamusoro hakuzoviga hunhu hwehunhu hwakanaka kana hwakaipa, chero chinzvimbo chingave chemuiti muhupenyu.
Nyaya: Chinhu chinoratidzwa sechinhu chisina njere sezvisikwa, uye, izvo zvinofambira mberi kuva zvikamu zvine hungwaru seTriune Selves.
Meaning: ndiyo chinangwa mupfungwa yakataurwa.
Medium, A: izwi rakajairika rinoreva chiteshi, zvinoreva, kana kufambisa. Iri pano rinoshandiswa kutsanangura munhu ane mwaranzi kana muviri we astral unobuda uye uchibuditsa mhepo inokwezva chero eakawanda ezvisikwa zvipuka, zvekutanga, kana zvinodzungaira mumashure mekufa kwenyika uye izvo zvinotsvaga vapenyu. Svikiro saka rinoshanda senzira yekutaurirana pakati peiye nemuiti mumiviri yevanhu.
Memory: iko kubereka kweyekufungidzira neiyo iyo pfungwa yacho inotorwa. Kune maviri marudzi ekurangarira: pfungwa-ndangariro, uye muiti-ndangariro. Yeyemurangariro-ndangariro kune makirasi mana: kuona ndangariro, kunzwa ndangariro, kuravira ndangariro, uye hwema ndangariro. Seti yega yega yenhengo dzenzwi ina dzakarongedzwa kutora kuratidzwa kwechinhu icho chiri mumiriri, uye kuendesa zvimiro kune izvo izvo zvinoratidzwa zvakanyorwa, uye nazvo zvadzokororwazve; mumunhu, ndiwo mweya wekufema. Iko kubereka kwechiratidzo ndangariro.
Memory, Doer-: iko kubereka kweye nyika dzekunzwa-uye-chishuwo mumuviri wayo uripo, kana mune imwe yemitumbi yekare yaakagara pasi pano. Muiti haaoni kana kunzwa kana kuravira kana kunhuwidza. Asi zvinoonekwa, ruzha, kuravira, uye hwema izvo zvinoyemedzwa pane mweya wekufema unobata pakunzwa-uye-chishuwo chemuiti uye zvinounza kurwadziwa kana kunakidzwa, mufaro kana kusuwa, tariro kana kutya, kutya kana kusuwa. Aya manzwiro ndeekuita-ndangariro dzezvinhu zvekunakidzwa kana kushushikana kwaakasangana nako. Kune makirasi mana evaiti-ndangariro: iyo psycho-panyama, ayo maitiro ekunzwa-uye-chishuwo kuzviitiko zvemuviri zvehupenyu hwazvino; ndangariro dzepfungwa, ndiko kuita kwe
kunzwa-uye-chishuwo kunzvimbo nezvinhu, zve kana zvinopesana, zvinova zvakakonzerwa nemamiriro ezvinhu akafanana neakaitika muhupenyu hwekare; ndangariro dzepfungwa, idzo dzine hanya nemibvunzo yechakanaka kana chakaipa kana kugadzirisa matambudziko epfungwa kana
kugadzirisa kweakangoerekana kana asingatarisirwe mamiriro ehupenyu; uye psycho-noetic ndangariro, iyo ine chekuita neruzivo rwekuti ndeupi, kana nguva yanyangarika muchinguva uye muiti anoziva kuziva kwake ega mukuzivikanwa kusingagumi
pasinei nehupenyu hwose nerufu rwave rwakapfuura.
Memory, Sense-: inosanganisira (a) mitezo yeziso, sekhamera inotorwa mifananidzo; (b) iyo pfungwa yekuona iyo iyo yakajeka kuona uye kutarisa kunofanira kuitwa; (c) iyo isina kunaka kana ndiro iyo panofanira kufemerwa mufananidzo uye panofanira kuburitswa pikicha; uye (d) uyo anotarisa uye anotora mufananidzo. Iyo seti yezvimiro zvekuona ndiyo michina yemagetsi inoshandiswa mukuona. Kuona ndicho chinhu chakasarudzika chinoshandiswa kutepfenyura zvinoonekwa kana pikicha yakanangiswa pachimiro chemweya-fomu. Muiti ndiye muoni anoona iyo pikicha yakanangidzirwa pane yayo mweya-fomu. Iko kubereka kana ndangariro yemufananidzo iwoyo otomatiki uye zvinehunyanzvi kuburitswa nekubatana nechinhu chinofanira kurangarirwa. Chero ipi imwe pfungwa yepfungwa inopindira kana inodzivirira nyore kubereka kana ndangariro. Sezvo nepfungwa yekuona uye nhengo dzayo dzekuona, ndozvazvakaita nekunzwa nekuravira nekunhuwidza, uye zvadzinoita sekurangarira. Kuona ndiyo yekumeso kana yemifananidzo memory; kunzwa, iyo yekunzwika kana phonographic memory; kuravira, kuyeuka kunofadza; uye kunhuwidza, iyo olfactory memory.
Mafungiro Evanhu uye Mafungiro Akangwara:Mafungire emunhu maonero eupenyu; yakafanana nemhepo ine chinangwa chakazara chekuve kana kuita kana kuve nechimwe chinhu. Pfungwa yake yakatarwa ndiyo chaiyo nzira uye nzira mukuve kana mukuita kana kuve nechero icho chinhu chiri, icho chakatemwa uye chinounzwa nekufunga.
Mental Operations: ndiyo nzira kana nzira kana kushanda kwechero ipi yepfungwa nhatu dzinoshandiswa nemuiti-mumuviri.
Metempsychosis: inguva mushure mekunge muiti asiya Horo yekutongwa uye mweya-fomu, uye ari mukati uye achipfuura nenzira yekuchenesa, uko kwaanopatsanura izvo zvezvishuwo zvake zvinokonzeresa kutambura, kubva kune zvido zvake zviri nani zvinoita kuti zvifare. Metempsychosis inoguma kana izvi zvaitwa.
Pfungwa: iko kushanda kweakawara-nyaya. Kune pfungwa nomwe, ndiko kuti, marudzi manomwe ekufunga neTriune Self, neKwayedza kweUngwaru, - asi izvo zvakafanana. Mhando dzese nomwe dzinofanirwa kuita zvinoenderana nemusimboti mumwe, ndiko kuti, kubata Chiedza zvakadzikama pachinhu chekufunga. Ndidzo: pfungwa yeI-ness uye nepfungwa yekuzvida kwemuzivi; pfungwa yekururamisa uye pfungwa yekufunga kweanofunga; pfungwa yekunzwa uye pfungwa yechido chemuiti; uye muviri wepfungwa uyo unoshandiswawo nemuiti wezvakasikwa, uye nezvechisikirwo chete.
Izwi rekuti "pfungwa" pano rinoshandiswa seiro basa kana kuita kana chinhu icho kana nacho kufunga kunoitwa. Iri izwi rakajairika pano repfungwa nomwe, uye yega yeanomwe iri echikonzero chechikamu chemufungi weTriune Self. Kufunga ndiko kubatisisa kwechiedza cheConscious pane iyo nyaya yekufunga. Pfungwa yeI-ness uye iyo pfungwa yehunhu inoshandiswa nemativi maviri eanoziva weTriune Self. Pfungwa yekururamisa uye pfungwa dzekufunga zvinoshandiswa neanofunga weTriune Self. Iyo yekunzwa-pfungwa uye chishuwo-pfungwa uye muviri-pfungwa zvinofanirwa kushandiswa nemuiti: maviri ekutanga kusiyanisa kunzwa uye chishuwo kubva mumuviri uye nehunhu uye kuva nazvo mune zvakaenzana mubatanidzwa; iyo pfungwa-yemuviri inofanira kushandiswa kuburikidza nemanzwi mana, emuviri uye hukama hwayo nemasikirwo.
Pfungwa, Muviri-: Chinangwa chaicho chemuviri-pfungwa ndechekushandisa kwekunzwa-uye-chishuwo, kutarisira nekutonga muviri, uye kuburikidza nemuviri kutungamira nekutonga nyika ina kuburikidza nepfungwa ina nenhengo dzadzo muviri. Iyo muviri-pfungwa inogona kufunga chete kuburikidza nemanzwiro uye mune zvakatemerwa kune manzwiro uye zvine hunhu nyaya. Panzvimbo pekudzorwa, muviri wepfungwa unodzora kunzwa-uye-chishuwo zvekuti havakwanise kuzvitsaura kubva panyama, uye pfungwa-yemuviri inodzora kufunga kwavo zvekuti vanomanikidzwa kufunga maererano nemanzwiro panzvimbo mazwi akakodzera kunzwa-uye-chishuwo.
Pfungwa, Inonzwa-: ndiko kunzwa kunofunga, zvinoenderana nemabasa ayo mana. Uku ndiko kunzwisisa, kufunga, kuronga, uye kuronga. Asi pachinzvimbo chekushandisa izvi kuzvisunungura kubva muhusungwa kune zvakasikwa, zvinodzorwa kuburikidza nepfungwa-yemuviri pachisikirwo kuburikidza nepfungwa ina: kuona, kunzwa, kuravira uye kunhuwidza.
Mind, The Desire-: iyo chishuwo inofanirwa kushandisa kuranga uye kudzora manzwiro uye pachawo; kuzvitsauranisa pachayo sekuda kubva mumuviri mairi; uye, kuunza kubatana kwayo pachako nekunzwa; ine, pachinzvimbo, yakazvibvumidza pachedu kuve pasi uye kudzorwa nepfungwa-yemuviri mukushandira kupfungwa uye kuzvinhu zvakasikwa.
Maitiro: akatsunga kusvika padanho rekuti manzwiro uye zvishuwo zvemunhu zvinotungamirirwa nezwi risina ruzha rehana mumoyo maererano nezvisingafanirwe kuitwa, uye nekutonga kwakanaka kwekufunga, nezve zvekuita. Zvino, zvisinei nekukwezva kwepfungwa, mufambiro wemunhu unenge wakananga uye wakarurama, zvinekuremekedza iye nekufunga vamwe. Hunhu hwehunhu huchave hwaro hwepfungwa dzako.
Mysticism: iko kutenda mukati kana kuedza kwekuyanana naMwari, nekufungisisa kana nekuona kuve pedyo, kuvapo kana kutaurirana naMwari. Mystics ndeyedzese nyika uye chinamato, uye vamwe havana chitendero chakakosha. Maitiro kana maitiro avo anosiyana kubva pakunyarara kune runyararo kusvika kune zvechisimba kurovedza muviri uye kudeedzera uye kubva kune mumwe wega kuzvimiririra kusvika kuratidzira kwakawanda. Vasinganzwisisike vanowanzovimbika muzvinangwa zvavo nekutenda uye vanoshingairira mukunamata kwavo. Vanogona kusimuka nekukasika kushamisika kuenda kumatunhu akakwirira, uye vonyura mukudzika kwekushushikana; zviitiko zvavo zvinogona kuve zvipfupi kana zvakareba. Asi izvi ndizvo chete zviitiko zvemanzwiro uye zvishuwo. Haisi mhedzisiro yekufunga kwakajeka; havana zivo. Zvavanofunga sekuziva Mwari kana kuva padyo naMwari zvinogara zvakabatana nezvinhu zvekuona, kunzwa, kuravira kana kunhuwidza, zvinova zvepfungwa - kwete zveYega, kana yeUngwaru.
Nature: muchina wakaumbwa neuwandu hwezvikamu zvisina njere; zvikamu zvinozivikanwa semabasa avo chete.
Zvinodiwa: ramangwana, chiito chinomanikidza, kazhinji chiriporipocho, pasina kupukunyuka kuna vamwari kana varume.
Noetic: Icho chine ruzivo kana chichienderana neruzivo.
Nhamba: ndiIye, yose, sedenderedzwa, umo nhamba dzose dzinosanganiswa.
Numeri: ndiwo maitiro ekuve, mukuenderera mberi nekubatana nekubatana, Kubatana.
Poshi: iri chibatanidzwa, kubatana kana kukwana, mavambo uye kuiswa kwehuwandu hwose sezvikamu zvaro, mukuwedzera kana kupedza.
Kubatana: ihwo hukama hwakanaka hwemitemo yese uye zvikamu
kune umwe neumwe.
Opinion: kutongwa kunoratidzwa mushure mekufungisisa kwezvinhu zvose zvehurukuro iri mubvunzo.
Mukana: ndiyo yakakodzera kana nguva inofadza kana mamiriro kana nzvimbo yekuita chimwe chinhu kuti zvizadzise chinangwa chipi nechipi uye chinonyanya kukosha nezvido kana zvinoda zvevanhu.
Pain: iyo yakagadzirisa pfungwa dzinoshungurudza sechirango chekufunga kusina kunaka kana kuita, uye ndicho chiziviso chinoshandiswa kune muiti wekunzwa-uye-chido chokubvisa chikonzero chacho.
Kushushikana: ndiko kutsamwa kwemanzwiro uye zvishuvo pamusoro pezvinhu kana zvidzidzo zvemashoko.
Kushivirira: iri kugadzikana uye kushingaira kushingaira mukuzadzika kwechido kana chinangwa.
Muviri Wakakwana Muviri: ndiyo mamiriro kana mamiriro anova ekupedzisira, akazara; kubva kwazviri hapana chinogona kurasikirwa, kana kune chero chinhu chingawedzerwa. Ndiwo muviri wakakwana usina bonde wenyama weTatu Utatu muDunhu re
Unhu: ndiwo muviri wevanhu, muviri, uye kuburikidza nekuita uyo asingaiti mafungiro-uye-kunzwa anofunga uye anotaura uye anoita.
Kushushikana: unhu hwepfungwa hunokonzerwa nekucherechedza kana kutenda kuti zvido zvevanhu hazvigoni kugutsikana; kuti vanhu nenyika zvakasununguka; uye, kuti hapana chakafanira kuitwa pamusoro payo.
Urongwa: ndiyo iyo inoratidza nzira kana nzira iyo chinangwa chakaitwa.
Mufaro: ndiko kutenderera kwekunzwa mukubvumirana nemanzwi, nekugutsikana kunzwa-uye-kuda.
Nhetembo: ndiyo unyanzvi hwekufananidzira zvinorehwa nepfungwa uye rhythm kuva mafomu kana mazwi enyasha kana emasimba.
Point, A: Ndicho chisina kusimba asi kubva pane zviyero zvinouya. Pfungwa ndiyo kutanga kwezvinhu zvose. Izvo zvisingazviratidzi uye zvinoratidzirwa zvakapatsanurwa nechinangwa. Izvo zvisingaoneki zvinoratidzira kuburikidza nepfungwa. Izvo zvinoratidzwa zvinodzokera kune vasina kuonekwa kuburikidza nechinhu.
Poise: ndiyo mamiriro ekuenzanisa, ekuenzana kwepfungwa nekudzivirira kwemuviri, umo munhu anofunga uye anonzwa uye anoita zviri nyore, asingatambudzi nemamiriro ezvinhu kana mamiriro ezvinhu, kana nemafungiro kana zviito zvevamwe.
Possessions: zvinodikanwa zvakadai sekudya, zvipfeko, pekugara, uye nzira dzekuchengetedza hunhu hwako munzvimbo yayo muhupenyu; pamusoro peizvi uye mune zvimwe zvese misungo, zvishuwo, uye ngetani.
Simba, Kuziva: chido, chinounza kuchinja mazviri, kana kuti chinokonzera kuchinja mune zvimwe zvinhu.
Pranayama: izwi reSanskrit iro rinoenderana nekuturikirwa kwakawanda. Chaizvoizvo kuitiswa zvinoreva kudzora kana kudzora kufema nezvakatemerwa kurovedza zvekuyera mweya, kuturika, kufema, kuturika, uye zvakare kufemesa kweimwe nhamba yekutenderera kwakadaro kana kwenguva yakati rebei. MuYoga Sutras yePatanjali, pranayama inopihwa sechina mumatanho masere kana nhanho dzeyoga. Chinangwa chepranayama chinonzi kudzora prana, kana kudzora kwepfungwa mukutarisa. Nekudaro, iyo tsika yepranayama inovhiringidza uye inokunda iyo chinangwa, nekuti kufunga kwakanangidzirwa kune kana pane kufema kana pane prana, uye kumira mukufema. Uku kufunga uye kumira mukufema kunodzivirira kufunga chaiko. Chiedza cheConscious chinoshandiswa mukufunga-kuzivisa iye anofunga iyo nyaya yekufunga kwake-chinodzivirirwa kuyerera nekumisa iyo yakasarudzika uye yenguva dzose kuyerera kwekufema kwemuviri. Chiedza cheConscious chinopinda chete pazvikamu zviviri zvisina kwazvakarerekera pakati pekuputika nekuputika uye kuputika nekupwanya. Kumira kunochengeta kunze kweChiedza. Nokudaro, hapana Chiedza; hapana kufunga chaiko; hapana yoga chaiyo kana mubatanidzwa; hapana zivo chaiyo.
sarudzo: Ndiko kunakidzwa kune mumwe munhu, nzvimbo kana chinhu kuburikidza nekunzwa nekuchiva, pasina kukodzera kururamiswa kwechokwadi kana chikonzero; inodzivisa kuona kwechokwadi mupfungwa.
Rusaruro: kutonga munhu, nzvimbo kana chinhu umo manzwiro-uye-chido zvinopesana, pasina kufunga, kana zvisinei, zvakanaka kana chikonzero. Kusarura kunodzivisa kururamisira uye zvakarurama.
Nheyo: ndiyo nharaunda iyo mazano ose ndeaari ivo uye neaya angave akakurumbira.
Pfungwa, A: ndicho chakakosha mune chimwe chinhu chaive, icho chave chakava chaicho, uye maererano nezvinoitwa nemunhu wacho chero kupi zvayo.
Kufambira mberi: ndiko kuramba kuri kuwedzera mukwanisi wekuziva, uye mukukwanisa kushandisa zvakanaka izvo izvo zvinozivikanwa.
Chirango: ndiyo chirango chekuita zvakaipa. Izvo hazvifananidzi kukonzera kutambudzika uye kutambura kune anorangwa; iyo inofanirwa kudzidzisa mumwe anorangwa kuti haakwanisi kuita zvisina kururama pasina kutambura, munguva pfupi kana kuti pfupi, migumisiro yezvakaipa.
Chinangwa: ndicho chinangwa chinotungamira mukuedza sechinhu ichocho pakarepo, iyo inoshingaira, kana yekupedzisira inofanira kuzivikanwa; iyo ndiyo yekuziva kwemauto, chinangwa mumashoko kana muchiito, kukwanisa kwekufunga uye kushanda, kuguma kwekuwana.
Quality: iyo yehutano hwakanaka hunosimbiswa mumhando uye basa rechinhu.
Chokwadi, A: iri chikwata sezvazviri, chisina kushamwaridzana, icho chaicho; iyo iyo inonzwa kana kuti inoziva, muhurumende kana mundiro iyo iyo iri, pasina kufungidzira kana kuti ukama kune chimwe chinhu kunze kweicho.
Chokwadi, Relative: kuenderera kwechokwadi kana zvinhu uye hukama hwavo kune mumwe nemumwe, muhurumende uye mundiro yavanoonekwa.
Chokwadi, Pakupedzisira: Kuziva, kusina chakanaka uye kwakakwana; Kuvapo kweChenjeri mukati uye kuburikidza nemhando yega yega yega uye yega yega yega yega uye Triune Self neUchenjeri kune nguva uye nzvimbo muYekusingaperi, panguva yose yekuenderera mberi kwekufambira mberi kwayo nguva dzose kuburikidza nekusvika madigiri akareba mukuziva kusvikira iyo imwe uye seChenjeri .
Realm of Permanence, The: inopararira fantasmagoria yenyika yevanhu yekuzvarwa nekufa, kufanana nezuva rinopenya mumhepo yatinofema. Asi munhu anofa anoona uye anonzwisisa nyika kwete kupfuura zvatinoona kana kunzwisisa zuva. Chikonzero ndechokuti maonero uye maonero hazvina kukodzera, uye kwete kuenderana nezvinhu izvo nguva uye rufu hazvigoni kuchinja. Asi Nyika yekusingaperi inokura uye inochengetedza nyika yevanhu kubva pakuparadzwa chose, sezvinoita chiedza chezuva uye hupenyu hwekukura kwezvinhu zvipenyu. Munhu anoziva mumutumbi achanzwisisa uye anoona Nyika yekusingaperi sezvaanonzwisisa uye anozviparadzanisa pachake kubva kuchinja muviri umo iye anoda uye anonzwa uye anofunga.
Reason: ndiye analyzer, mutongi uye mutongi; mutongi wekutonga sechiito chezivo maererano nemutemo wekururama. Ndiyo mhinduro yemibvunzo nezvinetso, kutanga uye kuguma kwekufunga, uye mutungamiri wekuziva.
Kudzokazve: ndiye muiti anogovera achibva kune zvimwe zvikamu zvayo, muhutachi, kuti avepo zvakare kubva kune pachake, mumasikirwo echisiki, apo mhuka yemhuka yemunhu yakagadzirirwa uye yakagadzirirwa kuti ipinde uye inotora hupenyu hwehupenyu mumuviri iwoyo. Mhuka yemhuka inogadzirirwa nekuidzidzisa iyo kushandisa masimba ayo, kufamba, nekudzokorora mazwi ayo akadzidziswa kushandisa. Izvozvo zvinodaro, sepuroti, ichiri chiri mhuka. Inova munhu nokukurumidza kana yakachenjera, sezvinoratidzwa nemibvunzo iyo inobvunza, uye iyo inonzwisisa.
Kudzorerwazve: ndiko kudzoreredza chizvarwa, kubereka kwemuviri. Izvi zvinoreva kuti: utachiona masero mumuviri anoshandiswa kwete kuunza mumwe muviri mupasi asi kushandura nekupa hutsva nehurefu hupenyu hwemuviri. Iyi ndeimwe nekuvaka zvakare muviri kubva kune isina kukwana murume kana mukadzi muviri kuita muviri wakakwana uye wakakwana usina bonde, izvo zvinoitwa nekusavaraidza pfungwa dzebonde kana kufunga nezve zviito zvepabonde; uye nemafungire epfungwa ekuramba achimutsiridza muviri wako kuhutano hwepakutanga hwawakabva.
Relation: ndiko kwakabva uye kuenzanirana mukubatana kwekupedzisira umo zvisikwa zvose zvemhando uye maumbirane ane njere uye Intelligences zvakabatana mu Conscious Sameness.
Chitendero: Ndiyo musungo weimwechete kana yechina yezvinhu zvezvisikwa, semoto kana mhepo kana mvura kana pasi, kuburikidza nemanzwi emuviri ekuona, kunzwa, kuravira, kana kunhuhwirira, iyo inobata kana kusunga mucherechedzo unoita mumuviri kudzokera ku nature. Izvi zvinoitwa mumafungiro uye zvinoshanda nekunamata uye nezvipiriso zvinopiswa nenziyo nekusaswa kana kubhabhatidza mumvura uye nezvinonhuwira kune mumwe kana vanamwari vakawanda vezvinhu zvemoto, mhepo, mvura, kana pasi.
Mutoro: kunobva paukwanisi wekuziva zvakanaka nezvakaipa; ndiyo kuvimba uye kuvimba kunogona kuiswa mune imwe yekuita zvose zvaakamboita uye zvezvino zvaakaita, kana kuti munguva yemberi, iye pachake anozvigadzirisa. Mutoro unosanganisira kutendeseka nekutendeseka, kukudzwa nekuvimbika uye zvimwe zviito sezvinoita musimba akasimba uye asingatyi, shoko rake rinonyanya kutendeseka kupfuura chibvumirano chemutemo.
Kumuka: rine zvinoreva zviviri. Yokutanga ndiko kuungana pamwe kwemashoko mana uye vanyori vemuviri wehupenyu hwekare, hwakagoverwa muzvisikwa mushure mekufa kwayo, uye kuvaka patsva nemafema-fomu yemuviri mutezo wekushumira sekugara kwe muiti paanodzokera pasi pasi upenyu. Chechipiri uye chinoreva chaicho ndechokuti muiti mumurume kana mukadzi muviri unovandudza muviri wepabonde kubva kune munhu asina kukwana kana muviri wevakadzi, iyo, kumuviri uko zvinokosha zvevakadzi vaviri zvakabatanidzwa mumuviri mumwechete wakakwana uye wakadzorerwa, akamutswa , kune imwe yekare uye yepakutanga uye isingafi yekukwana.
Vatsiva: iri chido chekuda kurwisa kune umwe mukuzvitsivira uye sechirango chezvikanganiso zvechokwadi kana zvekufungidzira zvakatambudzwa, uye kugutsa chido chako chokutsiva.
Rhythm: ndiwo hutano uye zvinoreva pfungwa zvinoratidzwa kuburikidza nechiyero kana kufamba mune rwiyo kana fomu, kana nezviratidzo zvakanyorwa kana mazwi.
Rudyi: ihwo huwandu hweruzivo rwekuti ndeupi unoziva, sekutonga kwake kwekuita kubva mukati.
Kururama: ndiwo mufungo wekufunga nekuita, sezvinodiwa nemurairo uye mutemo wekuzvibata, kune muiti wekunzwa-uye-nechido mumuviri. Inowanikwa mumoyo.
Kusuruvara: ndiko kuora mwoyo kwekunzwa nekufungisisa kusafunga.
Kuzvipa, Ipamusoro: ndicho chido kana chido icho munhu anoziva sechapamusoro, pamusoro, chakanaka kune zvisizvo, zvenyama, zviduku uye zviduku zvido zvehupenyu hwezuva nezuva. Munhu wepamusoro haasi wekusiyana naye
chido mukati mevanhu, asi munhu anofunga nezvepamusoro-soro nokuti, sechishuvo, isinganzwisisiki nechokuzviziva kwemuzivi weTunun Self yake, saka iyo chaiyo inobva kune chido che "Higher Self."
Kuzvinyengera: ndiyo nyika iyo muiti anozviisa kuburikidza nekurega kukwezva kana kukanganisa, kuda kana kusarura, kunokanganisa kufunga.
Kuzvipira: iyo zivo pachayo sezivo yeTunune Self.
Kunzwa: ndiko kutarisana uye kufungidzira kwezvisikwa zvezvisikwa pakunzwa, kuburikidza nemanzwi nemisungo yemuviri, zvichiguma nemanzwiro, manzwiro, chido. Kunzwa haisi manzwiro, manzwiro, kana chido. Pasina muviri, kunzwa hakunzwi. Apo manzwiro ari mumutumbi kune nguva inoramba ichiyerera yezvisikwa zvisikwa zvinouya kuburikidza nemanzwi uye ichipfuura nomuviri semafungiro ekunzwa, zvakangofanana nekunzwa kweinki pamapepa. Sezvo usina kunze kweinki uye pepa hapange pasina pepa pepaji, naizvozvo pasina nzizi dzezvisikwa zvezvisikwa uye kunzwa kuti paisazova nekunzwa. Zvose marwadzo uye mafaro uye manzwiro, zvose mufaro uye tarisiro uye kutya, kusuruvara, rima uye kusuruvara mafungiro, migumisiro yezvakaratidzwa zvakaitwa pamanzwiro, nekubatana nemhando dzezvinhu. Saizvozvowo ndizvo zvinopindurwa nechishuvo chekuonekwa kunoitwa nemanzwiro, sekushamisira, cupidity, kuchiva, avarice, kukurumidza, kuchiva, kana chido. Asi chido mukati maro kunze kwemuviri hachisi chimwe cheizvi, kwete kungonzwa kunzwa ndiko kwakaitwa pairi nekusangana kwayo nemhando yezvinhu.
Kunzwa Kwemuviri: ndiwo mamishinari ezvisikwa padare revanhu; vamiririri vezvinhu zvina zvakakura zvemoto, mhepo, mvura, uye pasi, izvo zvakasarudzwa seziso, kunzwa, kutora, uye kunhuwa kwemuviri womunhu.
Tsitsi: iyo pfungwa inoratidzirwa nekunzwa nekufunga pamusoro pevanhu, nzvimbo kana chinhu.
Tsitsi: ndiko kudengenyeka kwekunzwa nemanzwiro enhema.
Zvepabonde: ndiyo inofanirwa mumasikirwo emafungiro echishuvo uye kunzwa kunokonzerwa nemitumbi yevarume nevakadzi.
Zvepabonde: iyo inofungidzira yekunzwa-uye-chido mumutumbi womunhu unova nemhando uye zvikamu zvezvisikwa-madzimu kana kudhakwa kwechisikwa.
Tarisa: iri chikwata chemoto, chichiita senhume kumoto wechimiro chechimiro mumuviri wemunhu. Kutaridzika ndiyo nzira inoshandiswa nayo moto wezvinhu zvechisikiro uye chibereko chemuviri mumuviri nekuita chimwe nechimwe. Sight ndiyo chimiro chechimiro chinorondedzera uye chinogadzirisa nhengo dzehupenyu hwekubereka uye hunoshanda sekuona nehukama hwakanaka hwezvikamu zvayo.
kunyarara: ruzivo muzororo: unoziva kugadzikana pasina kufamba kana inzwi.
Chivi: ndiko kufunga uye kuita izvo munhu anoziva kuti haana kururama, kurwisana nezvakarurama, izvo munhu anoziva kuti akarurama. Chero kuenda kune izvo munhu anoziva kuti akarurama, chivi. Kune zvivi kune iwe pachako, kune vamwe, uye pamusoro pezvisikwa. Zvitadzo zvechivi zvinorwadziwa, zvirwere, kutambura, uye, pakupedzisira, rufu. Chivi chepakutanga nderangariro, inoteverwa nechiito chepabonde.
Skill: iyo inyanzvi yehudhi mukutaura kwezvinofungwa nemunhu uye zvido uye anonzwa.
Kurara: ndiko kurega kunofamba nekunzwa-uye-kuda kwemuiti, wehutachiona hwemagetsi uye nhengo ina dzemuviri, uye kubvisa mukati mawo pachako muhope dzisina kurota. Kuregererwa kunowanikwa nekunonoka kwemabasa emuviri nekuda kwekuda kwekuzorora, kwezvisikwa kugadzirisa marara, uye kugadzirisa muviri panguva yekusavapo kwemuiti. Zvadaro muiti wacho haafaniri kusangana nemasikirwo uye haagoni kuona, kunzwa, kubata kana kunhuwa.
Futa: iri chikwata chenyika chikamu, mumiriri wepasi pano muviri womunhu. Kunhuva ndiyo ivhu rinoshandiswa nenyika yezvinhu zvakasikwa uye chirwere chekudya mumutumbi chinosangana nekubatana. Kutarisa kunobata nekunzwa, kunzwa kunzwa kuburikidza nevira, kutora kunoita kunhuhwirira, kunhuhwira kunoitwa mumuviri. Sight ndiyo moto, kunzwa airy, kunwa mvura, uye kunhuhwirira pasiy yakasimba. Kunhuva ndiyo nheyo iyo imwe pfungwa zvitatu dzinoshanda.
Somnambulism: ndiko kufamba-famba panguva yokurara zvakadzama, kuita zvinhu neavo vavete sevanomuka, uye, pane dzimwe nguva, kuita zviito izvo somnambulist isingagoni kuedza paanomuka. Somnambulism inokonzerwa nekufungisisa kusangwara apo paakamuka; uye kufunga kwakadaro kusingafungi kunoita zvakadzama pafomu-kufema. Zvino imwe nguva muhope huru dzakange dzarota mumamiriro ekumutsa dzinoitwa kamwe-kamwe nefomu-fomu, maererano neurongwa hwakanyorwa pamusoro paro nesnambulist.
Somnambulist, A: ndiye mufambi wehope, uyo anofungidzira uye uyo muviri wake wekudenga uye fomu-kufema kunonzwisisika uye kunoenderana nekunyorerwa; mumwe anofunga nezvezvaanoda kuita asi anotya kuita. Zvinhu zvaaifunga pamusoro pezuva-kurota mumamiriro ekumutsa zvinozogadziriswa nefomu-kufema panguva yehope. Asi, pakumuka, haazive kuti muviri wake wakaitwa kuti uite roro.
Mweya: Izvo zvisingazivikanwe chimwe chinhu chezvitendero neuzivi, dzimwe nguva zvinonzi hazvife uye dzimwe nguva zvinonzi zvinofa muviri. Icho chimiro kana chekupusa chikamu chefemero-fomu yemuviri wese wemunhu; rutivi rwayo runoshanda ndiyo mweya.
Space: chinhu chaicho, icho chisina kuonekwa uye chisingazivi chinhu, iyo ndiyo yakabva uye inobva kune zvose zvinoratidzwa. Iyo isina mitsara, zvikamu, zvinotaura kana zviyero. Icho chiri kuburikidza nemhando yose yezvisikwa, umo maitiro ose aripo uye zvose zvisikwa zvinofamba uye zvine.
Mweya: iyo inobata rutivi rwechigadzirwa chechimiro chinopa simba uye chinoshanda kuburikidza nedzimwe rutivi kana rutivi rwekunze rwaro, runonzi nyaya.
Kuita zvemidzimu:. zvinowanzozonzi kunamata, zvine chokuita nemhando yezvinyorwa kana zvikamu zvemoto, mhepo, mvura, uye pasi, uye dzimwe nguva nezvikamu zvemuiti wevanhu vakabva panyika upenyu. Izvi zvinowanzoonekwa kana kutaurirana nechisvikiro mumutambo. Muchitenderedzwa, mutambo unopenya kana kuti wechidimbu wepakati ndeye chimiro kana chimiro chinoshandiswa pane icho chakafa chinoratidzika, uye zvikamu kubva mumuviri wenyama wepakati uye zvisikwa zve miviri yevatariri zvinogona kutorwa kuti zvionekwe muviri uye uremu . Pasinei nekusaziva nekunyengedzwa kwakabatana nezvinhu zvakadai pamisangano, zvikamu zveavo vakafa vanogona kudzoka uye kuonekwa kuburikidza nechigadzirwa chemasvikiro.
Zvinhu: iyo isina mhepo nzvimbo, isina mitezo, yakasiyana, iyo yakafanana yose, iyo yose ine "hapana chinhu," hazvizivikanwi zvakafanana, izvo, zvisinei, zvinowanikwa mune zvisikwa.
Kubudirira: iri mukuzadzika kwechinangwa.
Succubus: iri chimiro chechikadzi chisingaoneki chichiedza kuvhara kana kuva neukama hwepabonde nemurume panguva yehope. Kufanana nemafuta, succubi ane marudzi maviri, uye anosiyana nenzira uye chinangwa. Incubi uye succubi hazvifaniri kuregererwa pasi pechikonzero chero chipi zvacho. Zvinogona kukuvadza zvakanyanya uye zvinokonzera kutambudzika kwekutambudzika kune munhu.
Chiratidzo, A:chinhu chinooneka kuti chimirire nyaya isingaoneki iyo munhu anofunga nezvayo, sezvayo pachayo kana maererano nezvimwe nyaya.
Ramba: iri chikwata chemvura yezvisikwa zvakasimukira kusvika pamwero wekuita semushumiri wezvakasikwa mumuviri womunhu. Kunwa ndiyo nzira inoshandiswa nayo mvura yezvinhu zvechisikiro uye hurongwa hwekufamba mumutumbi. Kunwa ndiro chikwata chinoshandiswa uye chinoratidzira zviyero zvemhepo uye pasi muzvikamu zvaro zvemvura kuti zvigadzirire kuparadzirwa nekudya uye nhengo dzaro kuti dzishande seinonaka.
Thinker: Mufungidziri chaiye weTatuune Self ari pakati pezivo, uye muiti waro mumuviri wemunhu. Inofunga nepfungwa yekururama uye pfungwa yekufunga. Hapana kutyisidzira kana kusava nechokwadi mumafungiro ayo, kwete kupesana pakati pezvakarurama uye chikonzero. Hazviiti zvikanganiso mukufunga kwayo; uye izvo zvinofunga zvichangobudirira.
Muiti-mu-mutumbi spasmodic uye haana kutsiga mukufunga; kunzwa-uye-kuda-kwavo kwepfungwa nguva dzose hakubvumirane, uye kufunga kwavo kunodzorwa nepfungwa-yemuviri iyo inofunga kuburikidza nepfungwa uye nezvinhu zvezvirevo. Uye, pachinzvimbo cheChiedza chakajeka, kufunga kunoitwa kazhinji mumhute uye neChiedza chakapararira mumhute. Asi, budiriro iri mupasi mhedzisiro yekufunga uye pfungwa dzakazviita. Dai vamwe vevaiti vari mumitumbi yevanhu vakazoziva kuti ndivo vasingafi zvavari, uye kuti vatonge panzvimbo pekudzorwa, nepfungwa-dzemuviri wavo, ivo vaigona kuzoshandura pasi kuita bindu munzira dzese dzakakwirira kupfuura egenda paradhiso.
Kufunga: ndiyo kuchengetedza kwakasimba kweChinhu Chiedza mukati memusoro wekufunga. Icho chiitiko che (1) kusarudzwa kwechinyorwa kana kuumbwa kwemubvunzo; (2) kushandura Chiedza che Conscious pairi, icho chinoitwa nekupa pfungwa dzisina kufanira kune iyo; (3) nekugara kwakasimba uye kuisa Chiedza cheNyanzvi pamusoro penyaya kana mubvunzo; uye (4) kuburikidza nokuunza Chiedza kunongedza nyaya yacho sechinhu. Apo Chiedza Chekucherechedza chinonyanya kutaura pamusoro pacho, pfungwa yacho inotanga kuzara kwezveruzivo rose rwechinyorwa chakasarudzwa kana kupindura kumubvunzo wakagadzirwa. Kufunga kunobata zvidzidzo maererano nekunzwisisa kwavo uye nekururama uye simba re
Kufunga, Kushanda: ndiyo chinangwa chokufunga pamusoro penyaya, uye iri kuedza kubata chiedza cheChenjeri mukati menyaya, kusvikira nyaya iyo ichizivikanwa, kana kuti kusvikira kufunga kuchivhiringidzwa kana kutendeuka kune imwe nyaya.
Kufunga, Passive: ndiko kufunga kwakaitwa pasina chinangwa chaicho; inotangwa nepfungwa dzenguva pfupi kana kuonekwa kwemazwi; kutamba kusina basa kana kurota-kwezuva kunosanganisira mumwe kana vatatu pfungwa dzemuiti muChiedza chakadaro
sezvinogona kunge iri mumhepo yepfungwa.
Kufunga Isingaiti Mafungiro, Izvozvo, Zvinoitika: Sei munhu achifunga? Anofunga nokuti pfungwa dzake dzinomumanikidza kufunga, pamusoro pezvinhu zvemashoko, nezvevanhu uye zviitiko, uye maitiro ake kwavari. Uye kana achifunga kuti anoda kuva chimwe chinhu, kuita chimwe chinhu, kana kuwana kana kuva nechimwe chinhu. Arikuda! Uye paanoda anozvinamatira iye pamwe neChiedza mupfungwa, kune zvaanoda; akasika kufunga. Izvi zvinoreva kuti iye Chiedza mukufunga kwake akasunganidzwa nechishuwo chake icho chinoda, kune iyo nyaya uye maitiro echiito, kana kuchinhu kana chinhu chaanoda. Nepfungwa iyoyo akabatanidzira nekusunga Chiedza iye. Uye nzira chete yaanokwanisa kusunungura Chiedza uye iye kubva pachisungo ichi ndeyekusabatana; ndiko kuti, anofanirwa kuyera pfungwa inomusunga, nekusunungura Chiedza uye chishuwo chake kuchinhu icho Anoda. Kuti uite izvi, zvinowanzotora hupenyu husingaverengeke, mazera, kudzidza, kunzwisisa; kuti anzwisise kuti haakwanise kuita futi uye akasununguka nechinhu chaakasungirirwa uye chakasungwa, sezvaanogona kana asina kubatanidzwa, asina kusungwa. Chido chako chiri iwe! Chiito kana chinhu chaunoda hausi iwe. Kana iwe ukazvinamatira uye ukazvisungira pairi nepfungwa, haugone kuita futi sekuti kana iwe usina kusungwa uye wakasununguka kuita pasina kusungirirwa. Naizvozvo, kufunga kusingagadzire pfungwa kuri mukusununguka kufunga, uye kusada, kuva, kubata, asi kuita, kuva, kubata, usina kusungwa pachiito, kune zvaunazvo, kune izvo iwe bata. Ndokunge, kufunga murusununguko. Ipapo unogona kufunga zvakajeka, neChiedza chakajeka, uye nesimba.
Kufunga, A: ihwo hupenyu huri muzvisikwa, hwakagadzirirwa uye huchigadziriswa mumoyo kuburikidza nekunzwa-uye-kuda neChiedza Chokunzwisisa, chakatsanangurwa mukati uye chakabudiswa kubva muuropi, uye chichazoita sechiito, chiito kana chiitiko, zvakare uye zvakare, kusvikira yakanyatsokwana. Mubereki anoita pfungwa yacho ndiye anokonzerwa nemigumisiro yose inoyerera kubva iyo kusvikira pfungwa iyo yakanyatsoenzaniswa; izvo zvinoreva, nezvakaitika kubva kune exteriorizations, kudzidza kubva pane zvakaitika, muiti
anosunungura Chiedza nemanzwiro-uye-chido kubva pane zvakasikwa kune zvavakasungwa, uye saka vanowana ruzivo.
Kufunga, Kuenzanisa: Kufunga kunotsanangurira Chiedza kubva mupfungwa apo kunzwa-uye-kuda kunobvumirana uye vose vari vaviri vanobvumirana nekuzvifunga pamusoro pechiito, chinangwa kana chiitiko chave chichipupurirwa neI-ness. Ipapo kufunga kunoendesa uye kunodzorera Chiedza kune chinyararire uye pfungwa yacho yakanyatsojeka, inogumira kuvapo.
Kufunga, The Balancing Factor in: ndicho chiratidzo icho hana inoputira pamusangariro sechisimbiso chekusaremekedzwa panguva yekusikwa kwemafungiro nekunzwa uye chido. Kuburikidza nekushandurwa kwose uye exteriorizations dzechirangariro, chiratidzo chinoramba chiripo kusvikira kuenzanisa kwepfungwa iyoyo. Chiratidzo uye pfungwa yacho inonyangarika apo pfungwa yacho yakaenzana.
Kufunga, Kutonga: Kutungamirirwa kweumwe wako panguva yekufa ndiyo pfungwa yekufunga yehupenyu hunotevera pasi pano. Icho chinogona kuchinjwa, asi kana chichitonga icho chinokurudzira kufunga kwake, chinobatsira pakusarudzwa kweshamwari dzake uye kutungamirira
kana kumuudza iye kune vamwe vanofunga zvakafanana. Inowanzosarudza mukusarudza kwebasa kana bhizimisi kana basa raanogona kutevera kuburikidza nehupenyu. Kunyange zvazvo inoramba iine pfungwa yake yekutonga inoita kuti afunge maitiro ake uye anopa
maridza maonero ake paupenyu.
Pfungwa, Kushanyirwa: Mifungo inopararira; ivo vakafanana sevabereki vavo; vanoshanyira mumwe nemumwe mupfungwa dzepfungwa dzevanhu, nekuda kwezvinangwa uye zvinhu izvo zvavanenge vasikwa, uye zvinosangana mumamiriro ezvinhu ezvakada kufanana nevanhu vanozvisika. Mafungiro ndiwo makuru anokonzera musangano uye kusangana kwevanhu; mufananidzo wemifungo yavo inovhomora vanhu pamwechete.
Time: ndiko kuchinja kwemasuniti kana mashoma emakamuri muhukama hwavo kune umwe neumwe. Kune marudzi mazhinji emarudzi munguva uye munyika dzakasiyana. Semuenzaniso: uwandu hwezvikwata zvinokonzera zuva, mwedzi, pasi, kuchinja muhukama hwavo kune mumwe nemumwe, hunofananidzwa sezuva nguva, mwedzi nguva, pasi nguva.
Transmigration: ndiyo nzira inotevera kusungirirwa kwemishonga yemurume neyemukadzi nemafema-mweya, mweya wemuviri wemunguva yemberi, pakuberekwa. Ndiyo kuchinja uye kuungana pamwe nekutsvaga zvose
zvikamu uye mararamiro uye maitiro akasiyana kubva kumigodhi nemiti yemichero nemhuka yemasikirwo ayo mavakagoverwa mushure mekufa, uye kurondedzera nekuzvivakira mumuviri mutsva wemunhu, nyika itsva, maererano nemweya, chimiro chemuviri kuva, nekugadzirira kuti ive nenyama yekugara kwekudzoka nekudzokazve kwemuiti wezvikamu zveTunune Self. Kuenda kwezvikamu zvemuviri kunopfuura kana kuburikidza nemadzimambo aya
yezvakasikwa: mineral or elemental, simiti kana yemiriwo, uye mhuka, kuva mwana. Iyo ndiyo mugumo wekufambisa kwemweya, chimiro, kumunhu, kumativi ose kana kuburikidza neumambo hutatu hwezvakasikwa hukapinda mumunhu.
Triune Self: Kuzviziva kusingaoneki uye kusafa Mumwe; chizivikanwe uye ruzivo rwunoita semuzidzi; kururamisira kwayo uye kuronga kufanana semafungiro, muHasingaperi; uye, chido chavo uye kunzwa sechikamu chemuiti, aripo nguva nenguva pasi.
Triune Self of the Worlds, The: iri sehuzivi hwepasi renyika yeTrune Selves, uye inomira maererano neSupreme Intelligence sezvinoitwa neTunune Self kuItelligence.
Kuvimba: ndiyo yekutenda kwakakosha mukuvimbika uye kwechokwadi kwevamwe vanhu, nokuti kune yakadzika yakagara akatendeseka kune uyo anovimba. Kana mumwe akaodzwa mwoyo nekuvimba kwake zvisina kunaka mune imwe, anofanira
kwete kurasikirwa nekutenda maari pachake, asi iye anofanira kudzidza kuchenjerera, kunyatsocherechedza icho uye maari waanovimba naye.
Kutaura chokwadi:ndicho chido chokufunga nekutaura zvakananga pamusoro pezvinhu kunze kwechinangwa chokunyengera kana kusareva zvisiri izvo nyaya inofungidzirwa kana kutaura pamusoro. Zvechokwadi, zvinonzwisisika kuti munhu haafaniri kuzivisa
vanhu vanofarira kana vanobvunza vose izvo zvaanoziva.
Mitauro: Chimiro chekutanga kana kutanga kwemafomu, uye chimiro ndechekubatanidzwa nekupedzwa kwechimiro. Mifungiro ndiyo mhando yemhuka uye zvinhu uye maitiro akabuda kunze semafungiro emanzwiro evanhu uye zvishuvo pahwindo rezvisikwa.
Kunzwisisa: ndiye anonzwisisa uye anonzwa zvinhu zvavari, izvo hukama hwavo huri, uye kunzwisisa chikonzero nei vakadaro uye vane ukama hwakadaro.
Unit, A: chinhu chisingakanganisike uye chisingadzoreki, denderedzwa, iro rine divi risingaratidzike, sezvakaratidzwa nehupamhi hwakakora. Rutivi rwunoratidzwa rune chinoshanda uye chekupusa divi, sezvakaratidzwa nepakati-pekutwasuka mutsara. Shanduko dzinoitwa nekudyidzana kwavo dzinoitwa nekuvapo kweasina kuratidzwa kuburikidza zvese zviri zviviri. Chidimbu chega chega chine mukana wekuve chinhu chechokwadi chaicho- Kuziva- nekuenderera mberi kwayo mukuziva mune narini
Units: Kudzidziswa uye dzidzo yezvikwata zvinoenderana nechinangwa chekuti chikwata chega chega chinogona kuva neUngwaru. Dzidzo yeunyuniti inoitwa muYunivhesiti yemitemo. Yunivhesiti yemitemo ndiyo
kukwana, kusagadzikana muviri wechipikirwa chekugumira, iyo inotungamirirwa nemuiti uye anofunga uye muzivi weTunune Self inozadzisa maererano neEternal Order of Progression.
Dzidzo yeunyanzvi husina njere yemasikirwo inosanganisira kuwedzera kwekugadziriswa kunoenderana nekushanda kwayo kuburikidza nedhigirii dzose kusvika pakupedzisira apedza kudzidza kubva kuYunivhesiti, kuti ave nyanzvi yekuchenjera pane zvisikwa.
Zviyero zviri mumuviri wakakwana ndezvi: zvikamu zvenguva duku, zvinyorwa zvinyorwa, uye zvikamu zvepfungwa, uye pakupedzisira pane fomu-fomu unit, iri mukurovedza kuti idzidziswe kubva mumasikirwo uye kuva nyanzvi yekuziva as ivo pachavo of zvose
zvinhu nemitemo. Zvikamu zviduku zvinowanikwa nevanyori vanopinda mukati uye vanoita sangano mumativi ose eYunivhesiti yemitemo. Panguva yekugara kwavo kwenguva refu vanopiwa simba uye vanopomerwa semitemo uye vanotumirwa kuva mitemo yekushanda yezvakasikwa. Sense diki ndiyo mamishinari anobva kune makuru makuru moto, mhepo, mvura, uye pasi, izvo zvinofanira kutungamirira maitiro mana-kuunza, kupumha, kubuda uye kudya-iyo nhengo
vari kuita zvikamu. Ifemu-fomu chikwata chinogadzirisa pfungwa uye zvirongwa uye nhengo mumutemo wekushanda kwemuviri.
Units, Zvisikwa: vanozivikanwa nekuziva as mabasa avo chete. Zvisikwa zvipenyu hazvizivi of chero chinhu. Kune marudzi mana: mahwindo asingabhadharwi asina kukwana uye asingatauri kune mamwe mauniti muhukuru kana sarudzo; zvikamu zvenguva duku, izvo zvinoumbwa mukati kana kuti kuwirirana mukugadzirisa kana mashoma kwekanguva ndokuzopfuura; zvinyorwa zvinyorwa, izvo zvinonyora uye zvakabata zvikamu zvishoma kwenguva kwechinguva; uye zvikamu zveanzwisisiro, sekuona, kunzwa, kuravira, uye kunhuwa, izvo zvinotungamirira kana kutonga maitiro mana emuviri womunhu. Zvose zvisikwa zvipenyu hazvina njere.
Unit, An Organ: Kupfurikidza nesero rimwe-link unit unit inhengo inoramba ichienderana nemasero ayo iyo nhengo yacho inogadzirwa, kuitira kuti iite basa rayo kana mabasa ayo anowirirana kune dzimwe nhengo mune imwe yezvirongwa zvina mumuviri iyo ndeyo.
Units, Sense: Ndiwo mana akabatanidza maumbirwo emuviri mumuviri unobatanidza uye unorondedzera manzwi mana ekuona, kunzwa, kuravira, uye kunhuhwirira, nemitemo yavo mana: kuona nekunaka, kunzwa nemhepo yekufema, kunakidza ne-circulative, uye kunhuwa ne kudyiwa; uye, nezvinhu zvina: moto, mhepo, mvura, uye pasi.
Hazvina maturo: Izvo zvisingaoneki uye zvisingaongi zvisingabatsiri zvezvinhu zvose kana zvigaro uye zvigadziro zvinodiwa munyika, zvichienzaniswa neRumambo Hwakasimba; hazvinzwisisi kusabatsiri kwekuedza kwaJehovha
kunakidzwa kwekufarirwa, uye kufara uye kuonekwa kwemamiriro ezvinhu, apo shungu yavo inofananidzwa nesimba rekuda muitiro wokutendeseka nekutendeseka.
Mabasa, Cloaks of: pano zvakanzi, vakaipa uye zvishuvo zvakashata zvemuiti muhupenyu hwevanhu izvo, mukati maro shure kwekufa zvinotadzisa kutambura apo muiti ari kuedza kuparadzaniswa navo. Izvo zvido zvinoshuva sejasi rezvakaipa zvinotamburawo,
nokuti havana nzira yekunyadzisa pasina muviri wemunhu. Nokudaro vanowanzotsvaka kutsvaga kwevanhu vane zvidikanwi uye avo vanozvipira kana kuti vanova chikonzero chekuda kudhakwa kana kuparwa kwemhosva.
Virtue: isimba, simba rekuda, mumutsika wokuvimbika uye hwechokwadi.
Will, Free: Icho ndicho chido chikuru, chekanguva, chenguva, kana yehupenyu. Inodzora zvido zvayo zvinopesana uye inogona kutonga zvido zvevamwe. Chido ndicho simba rinoziva mukati, izvo zvinogona kuunza shanduko pachako kana kuti zvinoshandura zvimwe zvinhu. Hapana chido mumunhu chakasununguka, nokuti chakabatanidzwa kana chakazvibatanidza pachavo kune zvinhu zvepfungwa paunofunga. Chimwe chido chinogona kudzora kana kutungamirirwa nechimwe chido, asi hapana chido chinogona kuchinja chimwe chido kana kukamanikidzwa kuchinja pachako. Hapana simba kunze kweriyo iro rinogona kuchinja. Chido chinogona kukundwa, chakapwanyika, uye chakaitwa pasi, asi hachigone kuchinjwa pachako kunze kwekuti ichisarudza uye chido chekuchinja. Izvo zvakasununguka kusarudza kana zvichange zvichida kana zvisingashanduki pachako. Iri simba rekusarudza kana richaramba rakabatana neizvi kana chinhu ichocho, kana kuti icho chicharega chikamu chechocho uye chisina kushamwaridzana, ndicho chikonzero chekusununguka, chinangwa chekusununguka icho chido chega chega chiri uye. Inogona kuwedzera pfungwa yaro kune imwe nzvimbo yerusununguko yekuda kuva, yekuita, kana kuva, pasina kuzvibatanidza pachayo kune zvaanoda kuva, kuite, kana kuva nayo. Apo chinangwa chichifunga kunze kwekubatanidzwa pane zvazvinofunga, chakasununguka, uye chine rusununguko. Mune rusununguko, inogona kuva kana kuita kana kuva nezvinodiwa kuva kana kuita kana kuva, chero bedzi iyo inoramba isina kushamwaridzana. Rusununguko rusununguko nderwe kuti rurege kushamwaridzana, kusabatanidzwa.
Uchenjeri: ndiko kushandiswa kwakarurama kwezivo.
Shandisa: ndezvepfungwa kana mabasa emuviri, nzira uye nzira iyo chinangwa chakaitwa.
Nyika, Noetic: haisi nyika yezvakasikwa-nyaya; iyo inzvimbo yakangwara kana ruzivo rweMambo weKusingaperi, kubatana kunoumbwa neveetic atmospheres yaTurune yose Selves uye yemitemo inodzora zvisikwa. Icho chizivo chisingaperi chisingagumi pamusoro pezvinhu zvose zveTurune uye pamusoro pezvose zvekare, zviripo uye izvo zvakagadziriswa sezveramangwana emarudzi mana enyika. Izvo zvinowanzogadzirisa uye kuchinja ruzivo rwemazwi munyika yevanhu kuburikidza nekuona uye kuedza hazvikwanise kuwedzera kunyika ye zivo. Izvi zvakadai semichero yezhizha uye yechando, iyo inouya uye inoenda. Nyika yezivo
ihwo huwandu hweruzivo rweMarudzi ose eTurune, uye ruzivo rwezvose runowanikwa kune umwe neumwe weTunune Self.
Zvakashata: iyo pfungwa kana chiito icho chiri kubva kune izvo munhu anoziva sekanakarurama.